ကြား​ကား​ဆွဲ​တဲ့ ​ကား​သ​မား​အ​သည်း – Grab Love Story
‘‘​ဓါတ်​ဆီ ​နှစ်​ဂါ​လံ . . . ​အင်​ဂျင်​ဝိုင် ​တစ်​လုံး’’
‘‘​ကို​ဇော်​ကြီး ​မ​နေ့​က​ဆီ​ဖိုး ​ပေး​ပြီး​ပြီ​လား’’
‘‘​ဟာ ​အိုး​စွပ် ​ခွက်​စွပ် ​မ​နေ့​က ​မ​ကျန်​ပါ​ဘူး’’
‘‘​ဟဲ့ ​ရီ​နွယ် . . ​ဇော်​ကြီး​ကျန်​တာ ​မ​ဟုတ်​ဘူး . . . ​ကို​တင်​သန်း’’
‘‘​ငါ့ . . . ​ယောင်​ပြီး ​ပြော​လိုက်​မိ​တာ ​ဇော်​ကြီး​ရေ့’’
​ဓါတ်​ဆီ​မှောင်​ခို ​အ​ရောင်း​ဆိုင်​မှ ​ဒေါ်​ဝိုင်း​သ​မီး ​ရီ​နွယ်​မှာ ​အ​တော်​တောင့်​တင်း​သော ​မိန်း​မ​လှ​လေး​ဖြစ်​သည်။ ​သ​မိုင်း​မှာ ​ဓါတ်​ဆီ ​အ​ရောင်း​ဆိုင်​တွေ ​ရှိ​သော်​လည်း ​ကား​သ​မား​ငယ်​ငယ် ​အ​ထူး​သ​ဖြင့် ​ရီ​နွယ့် ​အ​လှ​ကို ​အ​ပမ်း​ဖြေ ​ကြည့်​လိုက်​သူ​တို့​က ​သည်​ရောက်​မှ ​ဝယ်​ကြ​ထည့်​ကြ​သည်။ ​ရီ​နွယ့်​အ​မေ​က​လည်း ​ဒါ​ကို ​သ​ဘော​ပေါက်​ထား​သည်။ ​ဓါတ်​ဆီ​ဂါ​လံ​ခွက်​ကို ​မ​နိုင်​မ​နင်း ​ယူ​လာ​တတ်​သော ​ရီ​နွယ့်​လက်​က​လေး​ကို ​အုပ်​ကိုင်​ဖမ်း​ယူ​လိုက်​ရ​သည်​ကို​ပင် ​သူ​တို့​ဓါတ်​ဆီ​ဖိုး​လေး ​တ​ဝက်​ကျိုး​သွား​အောင်​ကို ​တန်​သည်​ထင်​ကြ​၏။ ​ပိုက်​ဆံ​ပေး​ပြီး ​ရီ​နွယ့် ​လက်​က​လေး​ကို ​ကိုင်​ရ​ပြီး ​ဆီ ​အ​လ​ကား​ရ​လိုက်​သ​လို ​သ​ဘော​ထား​ကြ​သည်။
​ဇော်​ကြီး ​ပေါ်​တက်​ကတ် ​အ​ဌား​ကား​လေး ​မောင်း​စား​သည်​မှာ (၂)​နှစ်​ခန့်​သာ ​ရှိ​သေး​သည်။ ​ဦး​လေး ​မြ​သူ​က ​ဇော်​ကြီး​အား ​ကျောင်း​တစ်​ဖက်​နှင့် ​ကား​မောင်း​စေ​ခြင်း ​ဖြစ်​သည်။ ​ဆယ်​တန်း ​မ​အောင်​ခင် ​က​တည်း​က ​ဇော်​ကြီး ​နေ့ (၆) ​နာ​ရီ ​မှ ​ည (၁၀ ) ​နာ​ရီ ​အ​ထိ​မောင်း​၏။ ​လိုင်​စင်​လုံးဝ​မ​ရှိ၊ ​တ​က္က​သိုလ် ​ရောက်​မှ ​လိုင်​စင်​ရ​ပြီး ​အ​တန်း​မ​တက်​မီ ​သုံး​လေး​ခေါက်​လောက် ​ဆွဲ​ပြီး ​ည​နေ ​အ​တန်း​ပြီး​ချိန်​မှ ​ည​ဆယ်​နာ​ရီ​ခန့်​အ​ထိ ​မောင်း​သည်။ ‘‘​ကို​ဇော်​က ​တ​က္က​သိုလ်​ကျောင်း​သား​ဆို’’
‘‘​အံ​မာ​နော် ​ရီ​နွယ့် ​သူ​ငယ်​ချင်း​တွေ​က ​ပြော​ပါ​တယ်​နော်’’ ‘‘​ကျောင်း​ထဲ​ကို ​တစ်​ခါ​တစ်​လေ ​ရောက်​တတ်​တာ​ပဲ’’
​ဘာ​ဖြစ်​လို့ ​ဝန်​မ​ခံ​ချင်​ရ​တာ​လဲ​ဟု ​ရီ​နွယ် ​တွေး​မ​ရ။ ​စ​ကား​က​လည်း ​နည်း​သ​လား ​မ​မေး​နဲ့။
​ဟို​တင်​သန်း​တို့​နဲ့​က​တော့ ​ကွာ​ပါ့၊ ​ဓါတ်​ဆီ ​လာ​ဝယ်​တာ​နဲ့ ​မ​တူ​ဘူး။ ​ရီ​နွယ့်​ကို ​ကြည်​တဲ့ ​မျက်​လုံး​တွေ​က ​ကျွတ်​ထွက်​မ​တတ်​ပဲ . . ​စ​ကား​မ​ရှိ ​စ​ကား​ရှာ​ပြီး . . ​သိပ်​ရစ်​တဲ့​လူ . . ။ ​အ​မေ​က ​အဲ​ဒီ​လူ ​လာ​ပြီ​ဆို​ရင် ​ရီ​နွယ့်​ကို ​သ​တိ​ပေး​ကြည့်​တတ်​တယ် . . ​ရီ​နွယ် ​သိ​တာ​ပေါ့ ​ဟင်း . . ​ဟင်း . . . ​အ​သက် ( ၁၈ ) ​နှစ်​ပဲ
​အဲ ​ရီ​နွယ်​ကျ​တော့ ​ဇော်​ကြီး​ကို ​စ​ကား​မ​ရှိ ​စ​ကား​ရှာ​ပြီး . . ​ရစ်​တာ . . ​ဇော်​ကြီး​က ​ကျောက်​ရုပ်​ပင်။ ‘‘​အင်း​ပေါ့​လေ ​တ​က္က​သိုလ်​က ​ပြီး​ရင် ​အ​ရာ​ရှိ​ဖြစ်​မယ့်​လူ ​ဆို​တော့ ​ရီ​နွယ်​တို့​ကို ​သိပ်​မ​ရော​ဘူး​ပေါ့ ​ဟုတ်​လား’’
‘‘​ဒါ​ပေါ့ . . ​ဒါ​ပေါ့’’
​ဟင်း ​ကြည့်​ပါ​လား ​ဘယ်​လောက် ​စိတ်​ပျက်​ချင်​စ​ရာ ​ကောင်း​လိုက်​တဲ့ ​လူ​ကြီး​လဲ​လို့ . . ​စိတ်​ပိန်​တယ်။ ‘‘​အ​မေ​ဝိုင်း ​မ​နက်​ဖြန် ​ခု​လို ​ည​နေ​ပိုင်း ​အ​တွက် ​နှစ်​ဂါ​လံ ​ချန်​ပေး​ဦး​နော် .. ​ည ​ဆွဲ​စ​ရာ​မ​ရှိ​ပဲ ​ဖြစ်​နေ​ဦး​မယ်’’ ​ဘယ်​ကိ​စ္စ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် ​အ​မေ့​ကို​ပဲ ​ပြော​တတ်​တယ်​လေ၊ ​အ​ဖက်​မ​တန် ​သ​လို​လို​နဲ့ ​သိပ်​ခံ​ပြင်း​ဖို့ ​ကောင်း​တာ​ဘဲ။
‘‘​ဟို ​ဝယ်​သူ​လာ​ရင်​တော့ ​ရောင်း​မှာ​ပဲ . . ​ကျန်​ကျန် ​မ​ကျန်​ကျန် ’’ ​ရီ​နွယ် ​ရစ်​လိုက်​တဲ့ ​စ​ကား​ကို
​ဂ​ရု​မ​စိုက်​ဘူး၊ ​ဘာ​မှ​လဲ ​ပြန်​မ​ပြော​ဘူး။ ​ဓါတ်​ဆီ​ထည့်​ပြီး ​မောင်း​ထွက်​သွား​တယ်။
​ရီ​နွယ် ​စိတ်​ပေါက်​ပေါက်​နဲ့ ​ဂါ​လံ​ခွက်​ကြီး​ကို ​ဆောင့်​ချ​ပစ်​လိုက်​မိ​တယ်။ ‘‘​ဂွမ်း’’ ​က​နဲ ​အ​သံ​ကြား​တော့ ​အ​မေ​က ​ဆတ်​က​နဲ ​လှည့်​ကြည့်​ရင်း ​မာန်​သည်။ ‘‘​ဂါ​လံ​ခွက်​တစ်​လုံး ​တစ်​ရာ​ကျော်​တယ် ​သိ​ရဲ့​လား’’ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
‘‘​လုပ်​စမ်း​ပါ ​မင်း​က​လည်း ​စော်​လေး​က ​သန့်​ပါ​တယ်​ကွ . . ​ကုန်​စိမ်း​လာ​ချ​ရင်း ​ကုန်း​တာ​ဟ ​ဝါ​သ​နာ’’
‘‘​ကြေး​စား ​မ​ဟုတ်​ဘူး ​ဂစ်​တာ​ကြီး​က ​ဟဲ​ဗီး​ကြီး​ကွ’’
​အ​သား​ညို​ညို ​မွန်​ရည် ​သန့်​ပြန့်​ဟန်​ရှိ​သော်​လည်း ​အ​ဝတ်​အ​စား ​ခပ်​နွမ်း​နွမ်း​နှင့်​မိန်း​က​လေး​တစ်​ယောက်​ကို ​ကို​တင်​သန်း​တို့ ​ပင့်​လာ​ကြ​သည်။ ​ကား​ခေါင်း​အ​တွင်း​၌ ​မ​ဂ္ဂ​ဇင်း ​ဖတ်​နေ​သော ​ဇော်​ကြီး​က ​မိန်း​က​လေး​ကို ​တစ်​ချက်​ကြ​ည့်​ရင်း ​သက်​ပြင်း​ချ​မိ​သည်။ ​ကား​သ​မား​လော​က​မှာ ​ဒါ​မျိုး​တွေ​က​လည်း ​တွေ့​တတ်​လွန်း​သည်။ ​ဇော်​ကြီး​သည် ​အ​တွေ့​အ​ကြုံ​က​တော့ ​များ​သည်။ ​အ​ဝေ​ပြေး​ကား​ပိုင်​ရှင် ​ကို​သိန်း​အောင်
​ချက်​ပ​လက်​ကြီး​နှင့်​လည်း ​တစ်​ခါ​တစ်​ရံ ​ပြည်၊ ​ရွှေ​တောင်​အ​ထိ ​ခေါက်​စား​မောင်း​ဖူး​၏။ ​သည်​လိုင်း​ကျ​တော့ ​ရိုး​ရိုး​သား​သား ​ရောင်း​ဝယ်​စား​နေ​ကြ​သော ​မိန်း​မ​ငယ်​လေး​များ​ကြား​၌ ​စုံး​ပြူး​လေး​တွေ ​ပါ​တတ်​၏။ ​ကြေး​စား​လဲ​မ​ဟုတ် ​ခ​ရီး​သွား​ဟန်​လွဲ ​အ​ပျော်​သ​ဘော ​လှုပ်​ရှား​ကြ​သော ​ပျံ​လွှား​မ​လေး​တွေ​ရှိ​၏။ ​အဲ ​တစ်​သား​ကျ ​နှစ်​သား​ကျ ​ပျံ​လွှား​မ​ကြီး​တွေ​လည်း​ရှိ​၏။ ​စံ​ပယ်​ယာ ​စံ​လှ​နှင့်​က​တော့ ​အ​ကြော​တည့်​သည်။ ​အ​လေ​န​တော ​ပါး​စပ်​က ​ထွက်​တတ်​သော ​စံ​လှ​နှင့် ​အ​ယု​တ္တ​အ​န​တ္တ ​မိုး​မွ​နှ်​အောင် ​ပြော​တတ်​သော ​ဒေါ်​ဒေါင်း​ဆို​သည့် ​အ​ညာ​ကုန်​သည် ​မု​ဆိုး​မ ​အ​သက် (၃၅) ​နှစ်​ခန့် ​မိန်း​မ​နှင့်​သာ ​ဆုံ​မိ​လျှင် ​ကား​တစ်​စင်း​လုံး ​တ​ဝါး​ဝါး ​ဆူ​ညံ​လာ​သည်။
​ယ​ခု ​သည်​ဟာ​မ​လေး​ကား ​ဒေါ်​ဒေါင်း​တို့​ကဲ့​သို့​သော ​အ​မျိုး​အ​စား ​မ​ဟုတ်​သည်​က​တော့ ​အ​တိ​အ​ကျ။ ​ရိုး​သား​သော ​မျက်​လုံး​ညို​ညို​လေး​များ​က ​ဝမ်း​နည်း​ရိပ်​သမ်း​နေ​သ​ယောင် ​မှေး​ရီ​နေ​သည်။ ​ပိ​ပိ​ရိ​ရိ ​စေ့​ထား​သော ​နှုတ်​ခမ်း​နှစ်​လွှာ​က ​စ​ကား​တစ်​ခွန်း​ကို ​ဆို​ခဲ​စေ ​မြဲ​စေ ​ဆို​သည့် ​နှုတ်​ခမ်း​မျိုး။
‘‘​မိ​ချော​ပါ . . .’’
‘‘​ည​ကား​ရှိ​တယ် ​ကြို့​ပင်​ကောက်​အ​ထိ ​ရောက်​မယ်​ဆို​လို့ ​လိုက်​လာ​ခဲ့​တာ​ပါ . . ​ကား​ရှိ​တယ်​မို့​လား​ဟင်’’
‘‘​ရော် . . ​ကို​တူး​တော့ ​ရော​ဂါ​ရှာ​လာ​ပြီ’’
​မိ​ချော​က ​က​မ္ဘော​ဇ​လွယ်​အိတ်​ဟောင်း​လေး​ကို ​ထိပ်​မှ​စု​စည်း​ကာ ​တင်း​တင်း​ကြီး ​ကိုင်​ထား​သည်။ ​မျက်​လုံး​လေး​များ​က ​တစ်​စုံ​တစ်​ရာ​ကို ​သ​ဘော​ပေါက်​သ​လို ​ခြောက်​ခြား​စ ​ပြု​လာ​သည်။
‘‘​ကြို့​ပင်​ကောက် ​မ​ရောက်​ပါ​ဘူး ​နင်း​ကြမ်း​ကြီး​ဖြစ်​ဖြစ် ​က​ဝေ​စု​ဖြစ်​ဖြစ် ​အိုး​သည်​ကုန်း​ဖြစ်​ဖြစ် ​ဘယ်​မှာ​ဆင်း​ဆင်း ​ရ​ပါ​တယ်’’ ‘‘​အ​ဖေါ်​တွေ​က ​ဘယ်​ရောက်​ကုန်​လို့​လဲ’’
‘‘​ကျွန်​မ​က ​ဒါ​ပ​ထ​မ​ဆုံး ​လိုက်​လာ​တာ . . . ​မ​ရွေး​တစ်​တင်း​နဲ့ ​ဇီး​ချို​နှစ်​တောင်း​ပဲ ​ယူ​လာ​တာ ​ရောင်း​ကောင်း​လို့ ​ရောက်​တာ​နဲ့ ​ကုန်​ရော၊ ​သူ​တို့​က ​နောက်​နှစ်​ရက်​လောက် ​ဆက်​နေ​ဦး​မှာ ​ကုန်​ချင်း​က ​မ​တူ​ဘူး၊ ​ဒါ​ကြောင့် ​ရောင်း​ကောင်း​တုန်း ​ပြန်​ယူ​ချင်​လို့​ပါ’’
​မိ​ချော ​လုံး​စေ့ ​ပတ်​စေ့ ​ရှင်း​ပြ​တော့ ​ထွန်း​ဇော် ​စိတ်​မ​ကောင်း၊ ​ဆုံး​ဖြတ်​ချက်​တစ်​ခု​ကို​လည်း ​အ​လျင်​အ​မြန် ​ချ​လိုက်​မိ​သည်။
‘‘​မိ​ချော . . . ​ကား​ပေါ်​တက်’’
‘‘​အစ်​မ​ရေ . . ​ရှေ့​မှာ ​ဟောင်း​လောင်း​ကြီး​ခင်​ဗျ . . ​တိုး​ထား’’
‘‘​ဒါ​မျိုး​က ​ကြပ်​မှ​ကောင်း​တာ ​အစ်​မ​ရဲ့ . . ​ရှေ့​တိုး’’
‘‘​ဆောင့်​မယ်​လေ . . . ​ဥ​က္ကံ​ကျော်​ရင် ​ပို​ဆောင့်​ဦး​မယ် ​အ​မေ​ဂျမ်း ​ဝင်​သ​လား​အောက်​မေ့​ရ​တယ် . .
​စံ​ပယ်​ယာ ​စံ​လှ ​ရိုး​သား​စွာ ​ပြော​နေ​သော်​လည်း ​ရန်​ကုန်​ပြန် ​ကုန်​သည်​များ​ချည်း ​ရွေး​တင်​လာ​သော ​ခ​ရီး​သည်​များ​က ​ငိုက်​မြည်း​ရင်း​မှ ​ပြုံး​ကြ​သည်။
‘‘​အစ်​မ​ရေ . . ​ပေါင်​လေး​ဖြဲ​လိုက်​ပြီး ​ခွ​လိုက်​ပါ​လား ​အ​ဆင်​ပြေ​သွား​တာ​ပေါ့’’
​ကား​ပေါက် ​အ​တက်​အ​ဆင်း​ဘေး​မှ ​တောင်း​လွတ်​ကြီး​ကို ​ပိုက်​ကာ ​ကြပ်​ကြပ်​တည်း​တည်း ​ထိုင်​နေ​သော ​အ​သက် (၂၀) ​ခန့် ​အ​မျိုး​သ​မီး​တစ်​ဦး​ကို ​လက်​ညှိုး​ထိုး​ပြီး ​လှမ်း​ပြော​လိုက်​တယ်’’
‘‘​ဟာ . . ​ဒါ​တော့ ​အစ်​မ ​သက်​သက်​လိမ်​တာ​ပါ​ဗျာ ​စမ်း​ပြီး​ခွ​ကြည့်​လိုက်​စမ်း​ပါ . . ​နောက်​ဆို ​ခွ​တတ်​သွား​ရော’’
‘‘​ကိုယ့် . . ​မ​အေ . . ’’
‘‘​ဟင်း . . ​ဟင်း . . ​မ​ဆဲ​နဲ့​နော် . . ​စံ​လှ​ဆို​တဲ့​ကောင်​က ​မ​ကျေ​နပ်​ရင် . . ​ကန်​ချ​ခဲ့​မှာ’’
‘‘​အံ​မာ . . . ​လုပ်​ရဲ​လုပ်​ကြည့်​ပါ​လား’’
‘‘​လုပ်​ရဲ​လို့​ပေါ့​ဗျာ . . ​ဟင်း . . . ​ဟင်း . . . ​လုပ်​ချင်​တာ​ပေါ့’’
​စံ​လှ​အ​ကြောင်း ​သိ​နေ​ကြ​သော ​ဒေါ်​ဒေါင်း​တို့ ​အုပ်​စု​က ​စံ​လှ​ကို ​မျက်​စ​ပစ်​ပြီး ​မြှောက်​ပေး​နေ​ကြ​၏။ ​ခ​ရီး​သည် ​မိန်း​က​လေး​က ​မျက်​နှာ​ကြီး​နီ​ပြီး ​ဒေါ​ကန်​နေ​၏။ ​ထောက်​ကြံ့​ကို ​ကျော်​ပြီး ​မှော်​ဘီ ​မ​ဝင်​ခင် ​မိုး​ချုပ်​စ​ပြု​လာ​သည်။ ​တပ်​ကြီး​ကုန်း​အ​လွန် ​မှော်​ဘီ ​အ​ဝင်​၌ ​လမ်း​မီး​တိုင်​များ ​လင်း​နေ​ချေ​ပြီ။ ​မိ​ချော​ကိ​စ္စ​ကို ​ကူ​ညီ​ရင်း ​မောင်း​နေ​ကျ ​ကို​သိန်း​အောင်​၏ ​ချက်​ပ​လက် ​ဘတ်(စ်)​ကား​ကို ​ပြည်​ခေါက်​ကြေး​စား ​ထွန်း​ဇော် ​မောင်း​လာ​ခြင်း​ဖြစ်​ပြီး ​ရွှေ​မြ​ယာ​ကုန်း ​အ​လွန်​၌ ​တိုက်​ကြီး​ဘက်​မှ ​ဝင်​လာ​သော ​အီ​ဇူး​ဇူး​ကား​ကြီး​များ ​မီး​ရောင်​ကြောင့် ​သ​တိ​ထား​မောင်း​နေ​ရ​သည်။ ​မိုး​ညို . . ​သ​ရက်​ချောင်း ​လမ်း​ခွဲ​အ​ရောက် … ‘‘​ဒိုင်း . . ​ဖေါင်း . . ​ဖ​လပ် . . ​ဖ​လပ် . . ​ဖ​လပ်’’
​ဘီး​ပေါက်​သွား​သည်။ ​လိုင်​နာ​ကျွတ်​က ​တ​ရွတ်​တိုက်​ကြီး . . ​ဖ​လပ် . . ​ဖ​လပ် ​နှင့်​ပါ​လာ​သည်။
‘‘​ကျွတ်​ပြီ​ကွာ ​စ​ပယ်​ယာ​ဝှီး ​မ​ပါ​ဘူး’’
​စံ​ပယ်​ယာ ​စံ​လှ​စ​ကား​က ​ထွန်း​ဇော်​နား​ထင်​ကို ​တူ​နှင့် ​ထု​လိုက်​သည်​နှင့် ​တူ​လှ​သည်။
‘‘​ဟိုင်း​ဝေး​မောင်း​တာ ​စ​ပယ်​ယာ​ဘီး ​မ​ယူ​လာ​ဘူး​လား ​စံ​လှ​ရ’’
‘‘​မေ့​တာ ​အာ​စ​ရိ​ရဲ့ .. ​ဂို​ဒေါင်​ရှေ့​မှာ ​ထုတ်​ပြီး​သား’’
​သာ​ယာဝ​တီ ​ပန်း​ကန်​စက်​မှ ​လျှပ်​စစ်​မီး​ရောင် ​ပြာ​လဲ့​လဲ့​ကို ​ထိန်​ထိန်​ညီး​အောင် ​လှမ်း​တွေ့​နေ​ရ​သော်​လည်း ​ထွန်း​ဇော်​တို့ ​ကား​ရပ်​ထား​သော ​နေ​ရာ​က ​ခြုံ​နွယ် ​လယ်​ကွင်း​နှင့် ​မဲ​မဲ​မှောင်​နေ​သည်။ ​နောက်​ကား​ကို ​မျှော်​သူ​က ​မျှော်​သည်။
‘‘​ကိုး​ကိုး​တစ် ​အ​လာ​ကို ​စောင့်​ရ​တော့​မှာ​ပဲ’’
​မ​နက် ​လေး​နာ​ရီ​ခန့် ​ထွက်​လာ​မည့် ​ကို​သိန်း​အောင် ​မောင်း​လာ​သော ​ကား​ကို​သာ ​စောင့်​ဖို့​ရှိ​တော့​၏။ ​စံ​လှ​က ​လွယ်​အိတ်​ကို ​စ​လွယ်​သိုင်း​လွယ်​လိုက်​၏။
‘‘​ငွေ​ပါ​တဲ့​သူ​တွေ ​လုံ​လုံ​ခြုံ​ခြုံ ​ထား​ဗျို့ ​ရန်​သူ​မျိုး​ငါး​ပါး​တော့ ​တာ​ဝန်​မ​ယူ​နိုင်​ဘူး​နော်’’ ​မှောင်​ကြီး​မဲ​ထဲ​၌ ​ခြောက်​ခြား​စွာ ​ငြိမ်​သက်​သွား​၏။
‘‘​ကား​ပေါ်​မှာ ​အိပ်​ချင်​တဲ့​သူ ​ဝင်​အိပ် . . ​နှင်း​မ​စို​ဘူး​ပေါ့​ဗျာ ​ကျုပ်​တို့​က​တော့ ​ကား​စောင့်​ရ​မှာ​မို့ ​ကား​ခေါင်း​ပေါ် ​တက်​အိပ်​မှာ’’
​ထွန်း​ဇော် ​ဖင်​ထိုင်​ခုံ​အောက်​မှ ​စောင်​ပါး​လေး​ထုတ်​ယူ​ပြီး ​ကား​အောက်​ဆင်း​ရန် ​ပြင်​လိုက်​သည်။
‘‘​အစ်​ကို . . ’’
​အား​ငယ်​တုန်​လှုပ်​နေ​ရှာ​သော ​မိ​ချော​အ​သံ​က ​တိုး​ညှင်း​လွန်း​လှ​သည်။ ​ထွန်း​ဇော် ​လှည့်​ကြည့်​သည်။
‘‘​မိ​ချော ​ပိုက်​ဆံ​အိတ် ​ယူ​ထား​ပေး​ပါ​နော်’’
​စ​ပယ်​ယာ ​စံ​လှ ​စ​ကား​ကို ​ခ​ရီး​မ​သွား​ဘူး​သော ​မိ​ချော​က ​အ​ဟုတ်​ထင်​ကာ ​အ​ကြီး​အ​ကျယ်​ကြောက်​နေ​၏။ ‘‘​အ​လ​ကား ​စံ​လှ ​နောက်​တာ​ပါ ​မိ​ချော​ရဲ့ ​ဒီ​လမ်း​က ​လုံ​ခြုံ​ပါ​တယ် . . ​ဒို့​သာ ​မ​သိ​တာ ​ဒီ​အ​မှောင်​တွေ​ထဲ​မှာ ​တပ်​မ​တော်​က ​အ​မြဲ​ကင်း​လှည့်​နေ​တာ​ပါ၊ ​နဲ​နဲ ​ည​နက်​သွား​တော့ ​တွေ​လိမ့်​မယ်​လေ ​ရဲ​ဘော်​တွေ’’ ‘‘​ဟာ . . ​သူ​များ​ကို ​မ​လိမ်​ပါ​နဲ့ ​အစ်​ကို​ရယ် ​ယူ​ထား​ပေး​ပါ​နော် . . ​မိ​ချော ​တ​ကယ်​ကြောက်​တာ’’ ​ထွန်း​ဇော် ​ထပ်​ရှင်း​ပြ​မ​နေ​တော့၊ ​မိ​ချော ​လွယ်​အိတ်​လေး​ကို ​ဖင်​ထိုင်​ခုံ ​သေ​တ္တာ​ထဲ ​ထည့်​ပြီး ​သော့​ခတ်​ပေး​လိုက်​၏။
​အ​မှောင် . . .
​အ​မှောင်​သည် ​အေး​စက် ​ပိန်း​ပိတ်​လာ​သည်။
‘‘​ဝှီး . . . ​ကျ​လိုက်​တဲ့​နှင်း​တွေ​ကွာ’’
​စံ​လှ​က ​စောင်​ကို ​တင်း​တင်း​ခြုံ​ရင်း ​ငြီး​သည်။ ​ပါး​စပ်​က ​ဆေး​ပေါ့​လိပ်​ကို​လည်း ​တွင်​တွင်​ဖွာ​သေး​သည်။
‘‘​စံ​လှ ​အိပ်​ပြီ​လား . . ​ဟဲ့’’
​ဒေါ်​ဒေါင်း​အ​သံ ​ကား​ထဲ​မှ ​ထွက်​လာ​လေ​သည်။
‘‘​ဘယ်​လို​လုပ် ​အိပ်​လို့​ရ​မှာ​လဲ​ဗျာ၊ ​နှင်း​တွေ​က ​တ​အား​ကျ​နေ​တာ’’
‘‘​မ​အိပ်​သေး​ရင် ​လာ​လေ ​ဟဲ့ ​လက်​ဖက်​စား​မယ်’’ ‘‘​အေး​ဗျ ​ကျွန်​တော်​လည်း ​ခု​မှ​ဆာ​လာ​တာ’’
​ပြူ​တင်း​ပေါက် ​တံ​ခါး​ကို ​နင်း​ပြီး ​ဆင်း​ရန်​ပြင်​သည်။ ​ကား​အ​တွင်း​၌ ​မှောင်​နေ​သည်။
‘‘​ဟဲ့ . . ​နင့်​ကား ​ပျက်​မယ်​လို့​မှ ​ကြို​မ​သိ​တာ’’
‘‘​အော ​ကြို​သိ​ရင်​လည်း ​ကျုပ်​က​လည်း ​ထွက်​တောင်​မ​လာ​ဘူး’’
​ထွန်း​ဇော် ​စစ်​အ​င်္ကျီ​ကော်​လံ​ကို ​ဆွဲ​ထောင်​ထား​ရင်း ​ရန်​ကုန်​ဘက်​မှ ​ပေါ်​လာ​အံ့​သော ​ကား​များ​ကို ​မျှော်​နေ​မိ​သည်။
​စံ​လှ​နှင့် ​ဒေါ်​ဒေါင်း​တီး​တိုး​စ​ကား​တွေ ​ပြော​နေ​၏။ ​ဒေါ်​ဒေါင်း​အုပ်​စု​၌ ​ဒေါ်​ဒေါင်း၊ ​မ​ခင်၊ ​မ​သိန်း၊ ​မ​ပွင့်​နှင့် ​ထွန်း​ဇော် ​မ​သိ​သော ​မျက်​နှာ​စိမ်း ​မိန်း​က​လေး ​နှစ်​ယောက်​ပါ​သည်။ ​ပြည်၊ ​ရွှေ​တောင် ​သွား​ကြ​မည့် ​ခ​ရီး​သည် ( ၄ ) ​ယောက်​က​လည်း ​အ​မျိုး​သ​မီး​ချည်း ​ဖြစ်​၏။ ​မိ​ချော​နှင့်​ဆို​လျှင် ​စု​စု​ပေါင်း ​ခ​ရီး​သည် ( ၈ ) ​ယောက်​ပါ​သည်။ ​သေ​တ္တာ​ခွံ ​ဆီ​ပီ​ပါ​ခွံ​နှင့် ​ဂုန်​နီ​အိတ်​များ​ကြောင့် ​ကား​က ​အ​တန်​ငယ် ​ကြပ်​သ​ယောင် ​ဖြစ်​နေ​ရ​၏။
​ညီ​ညာ​စွာ ​တန်း​စီ​နေ​သော ​သာ​ယာဝ​တီ ​ပန်း​ကန်​စက်​ဆီ​မှ ​လျှပ်​စစ်​မီး​ရောင်​သည်​ပင် ​ထွန်း​ဇော်​တို့​အ​တွက် ​အား​ရှိ​စ​ရာ​ဖြစ်​နေ​ရ​၏။ ​ဆောင်း​ည​သည် ​အေး​စက်​စွာ ​တိတ်​ဆိတ်​နေ​၏။
‘‘​အစ်​ကို . . ​အစ်​ကို ​ခ​ဏ . . ​ခ​ဏ’’
​မှေး​စင်း​သ​ယောင် ​မျက်​ခွံ​များ​ကို ​မ​နဲ​ဖွင့်​ရ​၏။ ​မိ​ချော​အ​သံ​ဟု​လည်း ​စိတ်​က​သိ​လိုက်​သည်။
‘‘​အစ်​ကို ​စ​ပယ်​ယာ ​မ​ကောင်း​ဘူး’’ ‘‘​ဟင် . . . ​ဘာ​ဖြစ်​လို့​လဲ ​မိ​ချော​ရဲ့’’
​မိ​ချော ​ဆက်​မ​ပြော၊ ​လက်​နှစ်​ဖက်​ကို ​ချိုး​ဖဲ့​လုပ်​ရင်း ​ခေါင်း​ကို ​ငုံ့​နေ​သည်။ ​ကြယ်​ရောင် ​ဖျော့​ဖျော့​က ​မိ​ချော ​လှုပ်​ရှား​မှု​လေး​များ​ကို ​မြင်​နေ​ရ​လေ​သည်။
‘‘​စံ​လှ . . . ​မိ​ချော​ကို . . . ​ဘာ’’
‘‘​အို . . ​မိ​ချော​ကို ​ဘာ​မှ​မ​လုပ်​ပါ​ဘူး . . . ​ဟို ​ဒေါ်​ဒေါင်း​ဆို​တဲ့ ​မိန်း​မ​နဲ့ ​မိ​ချော​ပြော​မှာ’’
‘‘​အော် ​ဟော် ​သူ​က ​ဒီ​လို​ပဲ ​မိ​ချော​ရဲ့ ​ကုန်​သည်​တွေ​နဲ့ ​ရင်း​နှီး​နေ​တော့ ​အ​တူ​တူ ​အိပ်​တတ်​တယ် ​ဘာ​မှ​မ​ဖြစ်​ပါ​ဘူး . . . ​အ​ဟင်း’’
‘‘​အာ . . . ​ဖြစ်​နေ​တာ ​အစ်​ကို​က​လဲ ​မ​သိ​ပဲ​နဲ့’’
‘‘​ဖြစ်​နေ​တာ . . . ​ဟုတ်​လား’’
‘‘​အင်း . . ​ဆို ​သွား​ချောင်း​ကြည့်​ပါ​လား’’ ‘‘​ဟင် ​မ​ကြည့်​ရဲ​ဘူး ​ဟင်း​ဟင်း​ဟင်း’’
​က​တ္တ​ရာ​လမ်း​သည် ​နွေး​နေ​သည်။ ​မာ​ကျော​သော ​က​တ္တ​ရာ​လမ်း ​နွေး​နွေး​ပေါ်​၌ ​ထွန်း​ဇော် ​ထိုင်​ချ​လိုက်​ရာ ​မိ​ချော​သည်​လည်း ​သူ​နှင့် ​မ​နီး​မ​ဝေး​၌ ​အ​သာ​အ​ယာ ​ထိုင်​လိုက်​ရှာ​သည်။ ​ထွန်း​ဇော်​၏​အ​ကြည့်​က ​မိ​ချော​ထံ
​ရောက်​သည်။ ​အ​သက်​နှစ်​ဆယ်​ဝန်း​ကျင် ​မိ​ချော​၏ ​ကိုယ်​ခန်​ဓာ . . . ​ကျန်း​မာ​တောင့်​တင်း​သည်။ ​ရိုး​သား​ပုံ ​အ​မူ​အ​ယာ​လေး​များ​က ​ထွန်း​ဇော်​ကို ​က​ရု​ဏာ​သက်​စေ​သည်။
‘‘​မိ​ချော ​ရင်​တွေ​ခုန်​နေ​တာ’’ ​အ​ဆက်​အ​စပ်​မ​ရှိ ​တိုး​တိုး​ပြော​သည်။
‘‘​ဘာ​ဖြစ်​လို့ . . ’’
‘‘​ဟို​မှာ ​ဖြစ်​နေ​ကြ​တာ​ကြီး​ကို ​တွေ့​ပြီ​လား’’ ​မ​ပွင့်​တ​ပွင့်​လေး ​ပြော​လိုက်​သော ​မိ​ချော​၏ ​အ​သံ​လေး ​တုန်​လှိုက် ​လှိုက်​ခတ်​နေ​သည်​မှာ ​ထင်​ရှား​လှ​သည်။ ​မြောင်း​လာ​ပေး​တာ​လား​ဟု ​ထွန်း​ဇော် ​တွေး​၏။ ​အ​ထာ​ပေး​နေ​တာ ​ဟုတ်​ရင်​ကော​ဟု ​တွေး​ကာ ​စိတ်​က ​မ​ရဲ။ ​နက်​မှောင်​သော ​က​တ္တ​ရာ​လမ်း​က
​နှင်း​ထု​အ​တွင်း ​တိုး​ထွက်​သွား​ရာ​သို့​သာ ​ရင်​ပူ ​အာ​ခြောက်​နေ​မိ​သည်။
‘‘​အစ်​ကို ​ကား​လာ​ရင်​နှိုး​နော် ​မိ​ချော ​အိပ်​မ​လို့’’ ​စောင်​ပါး​လေး​ကို ​ခင်း​ပြီး ​ပြော​၏။
‘‘​ဒါ​ဖြင့် ​အစ်​ကို့ ​ပေါင်​ပေါ်​မှာ ​ခေါင်း​တင်​မယ် ​ကဲ’’
​ခေါင်း​လေး​က ​စွေ့​က​နဲ ​ပေါင်​ပေါ် ​ရောက်​လာ​သည်။ ​သစ်​ငုတ်​တို​ကြီး ​လှိုင်း​ပုတ်​ခံ​ရ​သည့်​နှယ် ​တုံ​က​နဲ ​တုံ​၏။ ​မိ​ချော ​ဆံ​ပင်​ကြား​မှ ​အုန်း​ဆီ​နှင့် ​စံ​ပယ်​ရ​နံ့​လေး​ကို ​ရှု​ရှိုက်​မိ​သည်။
​ထွန်း​ဇော် ​လည်​ချောင်း​မှ ​တစ်​ဆို့​ဆို့ ​ထွက်​သည့်​အ​သံ​က ​လှိုင်း​မ​ညီ၊ ​တုန်​ခါ​နေ​သည်။ ​စိတ်​လှုပ်​ရှား​မှု​က ​မြင့်​လာ​သည်။ ​နှ​လုံး​ခုန်​သံ​ကို ​မိ​ချော​ကြား​နေ​ရ​သည်။ ​တ​ကယ်​တမ်း ​အ​သည်း​နှ​လုံး​ကို ​ကိုင်​လှုပ်​ခြင်း ​ခံ​နေ​ရ​သ​လို ​ရင်​တွေ ​တ​ဒိတ်​ဒိတ် ​ခုန်​နေ​ရ​သည်​က ​မိ​ချော​သာ​ဖြစ်​သည်။ ​မိ​ချော ​မိန်း​မ​သား​တစ်​ဦး ​ဖြစ်​နေ​ရ​ခြင်း​ကို​ပင် ​ကိုယ်​ဖါ​သာ ​မ​ကျေ​နပ်။
​ထွန်း​ဇော်​ကို ​စ​တွေ့​လိုက်​စဉ်​က​တည်း​က ​မ​ချော ​ရှိန်း​က​နဲ ​နှ​လုံး​သွေး ​ဆောင့်​တိုး​ခြင်း​ကို ​ခံ​ခဲ့​ရ​သည်။ ​ရိုး​သား​ခန့်​ညား​ဟန် ​ယောက်ျား​ပီ​သ​သော ​ထွန်း​ဇော်​၏ ​ဥ​ပ​ဓိ​ရုပ်​ကို​က ​မ​ချော​ကို ​ခြောက်​ခြား​စေ​ခဲ့​သည်။ ​စံ​လှ​နှင့် ​ဒေါ်​ဒေါင်း​တို့ ​တ​ရွ​တှ်​ရွ​တှ် ​တြွ​ပတ်ြွ​ပတ် ​အ​လုပ်​ဖြစ်​နေ​သံ​များ​ကို ​နီး​ကပ်​စွာ ​ကြား​နေ​ရ​က​တည်း​က ​မိ​ချော ​မ​နေ​နိုင် ​မ​ထိုင်​နိုင် ​ဖြစ်​လာ​ရ​သည်။ ​မိ​ချော ​အိပ်​မော​ကျ​နေ​ဟန်​ဖြင့် ​လူး​လွန့်​ရင်း ​လက်​ကို ​ထွန်း​ဇော် ​ပေါင်​ကြား​ထဲ​သို့ ​ထည့်​လိုက်​သည်။
​အောက်​ခံ​ဘောင်း​ဘီ ​ပါ​ဟန်​မ​ရှိ​သော ​ထွန်း​ဇော် ​လီး​တန်​ကြီး​ကို ​လက်​ခုံ​ကြီး​နှင့် ​ဖိ​မိ​လိုက်​သည်။ ​ထွန်း​ဇော် ​တွန့်​က​နဲ ​ဖြစ်​သွား​ကာ ​လေ​ထိုး​လိုက်​သော ​တာ​ယာ​ကျွတ်​နှယ် ​ဖေါင်း​ဖေါင်း​တက်​လာ​သည်။ ​မိ​ချော ​အ​သက်​ရှု​သံ ​သိ​သိ​သာ​သာ ​ကျယ်​လာ​၏။ ​လက်​ချောင်း​လေး​များ​ဖြင့် ​ထန်း​လျက်​ချောင်း ​လှိမ့်​သ​လို ​လှိမ့်​ပေး​နေ​မိ​သည်။ ​အ​ညာ​မှာ ​ထန်း​လျက်​ချောင်း ​လှိမ့်​နေ​ကျ ​မိ​ချော ​လက်​က​လေး​များ​က ​ကျွမ်း​ကျင်​၏။ ​ထောင်း​က​နဲ​ကန်​တက်​လာ​သည်။ ​နှစ်​ဦး​စ​လုံး ​အ​ထာ​ပေါက်​နေ​ကြ​သည်။ ​ရင်​တွေ
​ပူ​လောင်​မော​ဟိုက်​လာ​ကြ​သည်။ ​ဟန်​ဆောင်​မှု ​အ​ရေ​ခွံ​သည် ​တ​ဖြေး​ဖြေး ​လျော​ကျ ​ပြေ​ဆင်း​လာ​နေ​သည်။ ​ထွန်း​ဇော်​၏ ​လက်​များ​က ​မိ​ချော ​ပု​ခုံး ​လုံး​လုံး​ကျစ်​ကျစ်​က​လေး​ကို ​လုံး​ပွတ် ​ဖိ​ညှစ်​မိ​၏။ ​မိ​ချော ‘‘​ဟင်း’’ ​က​နဲ ​သက်​ပြင်း​ချ​ပြီး ​ပက်​လက်​လှန်​လိုက်​သည်။ ​ခေါင်း​က ​ပူ​နွေး​သော ​က​တ္တ​ရာ​လမ်း​ပေါ်
​ရွှေ့​ပြောင်း​ချ​လိုက်​သည်။ ​မှုံ​ရီ​သော ​ကြယ်​ရောင်​က​လေး​များ​အောက် ​ထွန်း​ဇော်​၏ ​မျက်​နှာ​ကို ​မိ​ချော ​အ​မော​တ​ကော ​ရှာ​ဖွေ​ကြည့်​မိ​သည်။ ​အ​ထင်​သေး​သော ​မျက်​ဝန်း​များ​ကို ​မိ​ချော ​ရွံ​သည်။ ​မ​မြင်​နိုင်​သော ​အ​မှောင်​ရိပ်​ထဲ​မှ ​အစ်​ကို့​မျက်​နှာ​၌ ​အ​ချစ်​ရောင်​ခြည်​များ​သာ ​သန်း​နေ​ပါ​စေ​ဟု ​စိုး​ထိတ်​ဗျာ​ပါ​ဒ​နှင့် ​ကြိတ်​၍ ​ဆု​တောင်း​ရ​သည်။
‘‘​မိ​ချော . . . ​ရယ်’’
​ပြို​ဆင်း​လာ​သော ​ကာ​မ​တောင်​ကျ​ရေ​အ​လျင်​၌ ​သူ​၏​သိက်​ခာ​ကမ်း​ပါး​ကြီး ​တစ်​စ ​တစ်​စ ​တိုက်​စား​ပြို​ကျ​လာ​သော ​အ​သံ​ကြီး​က ​မိ​ချော​ရင်​ကို ​နွေး​ထွေး​သွား​စေ​သည်။ ​မ​ရဲ​တ​ရဲ ​တုန့်​ဆိုင်း​ဆိုင်း ​အစ်​ကို့​လက်​များ​ကို ​မိ​ချော ​ရဲ​ရဲ​တင်း​တင်း​လေး ​ဆွဲ​ယူ​ပြီး ​နို့​နှစ်​လုံး​ပေါ်​သို့ ​ဖိ​အုပ် ​ကိုင်​တွယ်​စေ​လိုက်​သည်။ ​အစ်​ကို့ ​အ​သက်​ရှု​သံ​ကြီး​က ​ည​နေ​က ​ကား​တာ​ယာ​အ​တွင်း​မှ ​လက်​ကျန်​လေ​များ ​စိမ့်​ထွက်​နေ​သ​လို ​ကျယ်​လောင်​လာ​သည်။ ​မိ​ချော ​အစ်​ကို့​ပေါင်​ကြား​သို့ ​က​မန်း​က​တမ်း ​လက်​ထိုး​သွင်း​လိုက်​ရာ ​မာ​တင်း ​မတ်​ထောင်​နေ​သော ​ချစ်​စ​ရာ ​တစ်​တုံး​တစ်​ခဲ ​အစ်​ကို့​ပ​စ္စည်း​ကြီး​ကို ​ပယ်​ပယ်​နယ်​နယ် ​ဆုပ်​နယ်​လေ​၏။ ​အစ်​ကို့​ဖင်​ကြီး ​မြောက်​ကြွ​မြောက်​ကြွ​နှ​င့် ​တ​ဆတ်​ဆတ်​တုန်​လာ​သည်​ကို ​မိ​ချော​ခံ​စား​ထိ​တွေ့​နေ​ရ​သည်။ ​မိ​ချော​နို့​တွေ​ပေါ်​တင်​ပေး​ထား​သော ​အ​ကို့​လက်​တွေ​က ​တ​ဖြည်း​ဖြည်း​နှ​င့်​ရဲ​တင်း​လာ​ပြီး ​နို့​လေး​တွေ​ကို ​ပယ်​ပယ်​နယ်​နယ် ​ဆုပ်​ကိုင်​ဖြစ်​ညှစ်​လာ​၏။ ​တ​ဖြည်း​ဖြည်း​နှ​င့် ​နှစ်​ဦး​သား ​နား​လည်​မှု​ရ​လာ​ကြ​သည်။
‘‘ ​ကား​နဲ့ ​ဝေး​ဝေး ​သွား​ရ​အောင်​နော် .. ’’
‘‘ ​အင်း . . . ’’
​မိ​ချော ​စောင်​ခေါက်​က​လေး​ကို ​ကောက်​ယူ​ပြီး ​က​တ္တ​ရာ​လမ်း ​အ​လယ်​ကြော​မှ ​ရန်​ကုန်​ဖက်​သို့ ​ပေ​သုံး​ဆယ်​ကျော်​လောက် ​လျှောက်​ခဲ့​ပြီး ​ထိုင်​ချ​လိုက်​သည်။ ​အစ်​ကို့​ရင်​ခွင်​၌ ​ပျော့​ခွေ​မှီ​လိုက်​မိ​သည်​နှင့်
​ဦး​စွာ ​ရင်​ဆိုင်​လိုက်​ရ​သည်​မှာ ​မိ​မိ ​ပေါင်​ကြား​သို့ ​အစ်​ကို့​လက်​က ​ခပ်​တင်း​တင်း ​ပင့်​အုပ် ​ပွတ်​သပ်​လိုက်​ခြင်း​ပင်​ဖြစ်​သည်။
​ထ​မီ​ခံ​နေ​သော်​လည်း ​ယောက်ျား​တစ်​ဦး​က ​မိ​မိ​၏ ​အ​တွင်း​ပ​စ္စည်း​ကို ​ယ​ခု​ကဲ့​သို့ ​ပယ်​ပယ်​နယ်​နယ် ​အ​နှိုက်​မ​ခံ​ဘူး​သေး​သော ​မိ​ချော​မှာ ​ဖြင်း​က​နဲ ​ကြက်​သီး​က​လေး​များ​ထ​ကာ ​အေး​သော​ည​ပင် ​ဖြစ်​လင့်​က​စား ​ချွေး​စေး​က​လေး​များ​ပင် ​ထွက်​လာ​ရ​သည်။
‘‘​ယား . . . ​တယ်’’
​အစ်​ကို့​ရင်​ဘတ်​ကို ​ဖွ​ဖွ​ထု​ရင်း ​မ​ပွင့်​တ​ပွင့် ​ပြော​၏။ ​အစ်​ကို​က ​ယု​ယ​မြတ်​နိုး​စွာ ​မိ​ချော​၏ ​ပါး​မို့​မို့​လေး​ကို ​တ​ရှိုက်​မက်​မက် ​နမ်း​ရှိုက်​ပေး​လိုက်​ပြီး ​နှစ်​သိမ့်​၏။ ​ကာ​မ​မီး​တောက်​သည် ​တ​ရှိန်​ရှိန် ​တောက်​လောင်​လာ​သည်။
​တ​ဆတ်​ဆတ် ​တုန်​လာ​သော ​ကိုယ်​လုံး​လေး​က ​ပျော့​ခွေ​ကျ​လာ​သည်။ ​အစ်​ကို​က ​လျော့​ပုံ​ချ​ပေး​ရင်း ​မိ​ချော​ပေါ်​သို့ ​မှောက်​ချ​၏။ ​နွေး​ထွေး​အိ​စက်​သော ​နို့​မာ​မာ​က​လေး​များ​က ​အစ်​ကို​၏ ​ရင်​ဘတ်​ကြီး​ကို ​ဆီး​ကြို​တော်​လှန်​လေ​သည်။ ​စို့​ထွက်​လာ​သော ​နှစ်​ဦး​စ​လုံး​ဆီ​မှ ​ကာ​မ​အ​ရည်​အ​နံ့​များ​က ​သင်​ပျံ့​လာ​နေ​ကြ​သည်။ ​အစ်​ကို့​ပ​စ္စည်း ​မာ​တင်း​တင်း​ကြီး​က ​မိ​ချော ​ပေါင်​ရင်း​ကြား​ကို ​ထောက်​မိ​နေ​ရာ ​အ​နေ​ရ​ခက်​လှ​သည်။
​ထို့​ကြောင့် ​နှုတ်​ခမ်း​လေး​ကို ​ကိုက်​ပြီး ​အ​ရဲ​စွန့်​လျက် ​အစ်​ကို့​ဟာ​ကြီး​ကို ​နေ​ရာ​ရွှေ့​ကာ ​တေ့​ပေး​လိုက်​သည်။ ​ထ​မီ​နှင့် ​လုံ​ချည်​သာ ​ကြား​ခံ​ရှိ​မ​နေ​ပါ​က ​စွပ်​က​နဲ ​ဝင်​သွား​မည်​မှာ ​ဧ​ကန်​ပင်​ဖြစ်​၏။ ​မိ​ချော ​ထ​မီ​စ​လေး​ကို ​အစ်​ကို ​မ​သိ​အောင် ​ဖြေ​ချ​လိုက်​သည်။ ​တင်း​ရင်း​နေ​သော ​တင်​ပါး​ကော့​ကော့​လေး ​အေး​က​နဲ ​နှင်း​ငွေ့​နှင့် ​ထိ​တွေ့​ခြင်း​ကို ​ခံ​စား​လိုက်​ရ​သည်။ ​အစ်​ကို့ ​ပု​ဆိုး​စ​သည်​လည်း ​အောက်​သို့ ​ပြေ​လျော့​ကျ​သွား​မှန်း ​မိ​ချော ​သိ​လိုက်​သည်။ ​ဤ​အ​သိ​နောက်​ဝယ် ​မိ​မိ​၏ ​အ​ပျို​စင်​ဘဝ​လေး​ကို ​ဝါး​မြို​ပစ်​တော့​မည့် ​အစ်​ကို့​ဟာ​ကြီး​က ​မိ​ချော​၏ ​တင်း​တင်း​ခုံး​ခုံး ​နေ​ရာ​လေး​ကို ‘‘ြွ​ပတ်’’ ​က​နဲ ​ထိုး​သွင်း​လိုက်​ခြင်း​ကို ​ခံ​လိုက်​ရ​တော့​လေ​သည်။ ​သွေး​သား​သန်​မာ ​အ​သန်​စွမ်း​ဆုံး​သော ​အ​ရွယ်​တွေ​မို့ ​နှစ်​ဦး​သား ​ဖိန့်​ဖိန့်​တုန်​ခါ ​ဖျပ်​ဖျပ်​လူး​သွား​၏။ ​အ​င်္ဂါ​နှစ်​ခု​က ​နျစ်​အ​တန်​ကြာ ​ကွဲ​ကွာ​နေ​သော ​မိတ်​ဆွေ​များ​နှယ် ​ငြိမ်​သက်​စွာ ​ဖိ​ကပ်​ပူး​နေ​ကြ​သည်။ ​ဇိ ​က​နဲ ​ဇိ ​က​နဲ ​လီး​ထိပ်​မှ ​ယို​စိမ့်​လာ​သော ​အ​ရည်​နွေး​နွေး​လေး​များ​က ​မိ​ချော ​စောက်​ဖုတ်​ကို ​စွတ်​စို​စေ​သည်။
‘‘​အစ်​ကို့​ဟာ​က ​အ​ရည်​တွေ ​ထွက်​တယ်’’
‘‘​အင်း . . . ​အ​ရမ်း​လုပ်​ချင်​နေ​ပြီ’’
‘‘​သွား . . ​ဟင်း ​ညစ်​ပတ်​ကြီး’’
​နှစ်​ယောက်​သား ​တ​ဟင်း​ဟင်း ​ဖက်​ထား​ခဲ့​ကြ​ဆဲ ​ဖြစ်​သည်။ ​ထို့​နောက် ​မိ​ချော​၏ ​အ​ပေါ်​အ​င်္ကျီ​လေး​နှင် ​ဘ​ရာ​စီ​ယာ​ကို ​အစ်​ကို​က ​ခက်​ခဲ​ချွတ်​ချော်​စွာ ​ဆွဲ​ချွတ်​လေ​တော့​သည်။
‘‘​အ​င်္ကျီ ​ပြဲ​သွား​ပြီ . . ​အ​ရမ်း​ပဲ’’
​အစ်​ကို့​ထံ​မှ ​တုန့်​ပြန်​သံ ​ထွက်​မ​လာ၊ ​အ​သက်​ရှု​သံ​ကြီး​က​သာ ​ပြင်း​သည်​ထက် ​ပြင်း​ထန်​လာ​လေ​သည်။ ​မိ​ချော ​မ​နေ​သာ​တော့​ပဲ ​အ​င်္ကျီ​နှင့် ​ဘ​ရာ​စီ​ယာ​ကို ​ချွတ်​ပေး​ရ​၏။ ​ည​ဆို​သော ​အ​လင်း​မဲ့​ဝန်း​ကျင်​၌ ​မိ​ချော​တစ်​ယောက် ​သ​တ္တိ​တွေ ​အ​ရမ်း​ကြီး​ကို ​ကောင်း​နေ​တာ့​သည်။ ​ရန်​ကုန်-​ပြည်​လမ်း​မ​ကြီး​ပေါ်​၌ ​ဝတ်​လစ်​စ​လစ် ​မိ​ချော​တစ်​ယောက်​ကို ​ခု​လို ​ပုံ​စံ​နှင့်​သာ ​တွေ့​လိုက်​ကြ​ပါ​က ​က​မ္ဘာ​ကျော်​သွား​မည်​လား ​မ​သိ။
‘‘​မြန်​မြန် ​လုပ်​ကွာ . . ​ချမ်း​တယ်’’
​ချမ်း​တယ် ​ဆို​သော ​မု​သာ​ဝါ​ဒ​စ​ကား​ကို ​မိ​ချော ​ဘာ​ကြောင့် ​ပြော​မိ​သည်​ကို​ပင် ​မိ​ချော​ကိုယ်​တိုင် ​မ​သိ​ပေ။ ​ဆောင်း​ဥ​တု​ကို ​မိ​ချော​သ​တိ​မ​ရ။ ​သိမ့်​က​နဲ ​တစ်​ကိုယ်​လုံး ​တုန်​သွား​ခြင်း​ကို​သာ ​ခံ​စား​ရ​သည်​က ​အ​မှန်​ပင်​ဖြစ်​၏။
‘‘​ပေါင် ​နည်း​နည်း​ကား . . ​အင်း’’
​အစ်​ကို့ ​အ​သံ​က ​အ​မော​တ​ကော​နိုင်​လှ​သည်။ ​လွတ်​ကျ​သွား​မှာ​စိုး​သော ​ဝက်​သား​တုံး​ကြီး​ကို ​အ​ငမ်း​မ​ရ ​မ​နား​တမ်း ​ကိုက်​ဖဲ့​စား​သောက်​နေ​သူ​၏ ​အ​သက်​ရှု​သံ​နှင့် ​တူ​လှ​သည်။ ​မိ​ချော ​အစ်​ကို့​ခါး​ကို ​ဖက်​ထား​သည်။ ​အ​ရပ်​ချင်း​က​မ​ညီ။ ​အစ်​ကို​က ​ဒေါင်​မြင့်​နေ​သ​ဖြင့် ​အစ်​ကို​လီး​ကြီး​က ​ငိုက်​လျှိုး​ပြီး ​စိုက်​ဝင်​နေ​ရ​သော ​စောက်​ခေါင်း​နှင့် ​ချော်​နေ​ပြန်​သည်။ ​မိ​ချော ​ခြေ​ဖျား​လေး ​ထောက်​ခါ ​ထောက်​ခါ ​အဝ​နှင့်​တေ့ . . ​တေ့​ပေး​သော်​လည်း ​မ​ဝင် ​ကြာ​တော့ ​ညောင်း​လာ​သည်။
‘‘​အိပ် . . ​ပေး​မယ်​ကွယ်’’
​အစ်​ကို့​ခါး​ကို ​မ​လွတ်​တမ်း​ဖက်​ရင်း​က ​မိ​ချော ​ထ​မီ​ပုံ​ပေါ် ​ကျော​ချ​ပြီး ​လှဲ​အိပ်​လိုက်​သည်။ ​နို့​နှစ်​လုံး​နှင့် ​အစ်​ကို့​လီး​က ​ထိ​ခတ် ​ပွတ်​သပ်​မိ​၍ ​ရင်​မှာ ​ပူ​ထူ​ပြီး ​ရှိန်း​က​နဲ ​ဖြစ်​ရ​သည်။ ​လီး​ကြီး​၏ ​လုံး​ပတ်​နှင့် ​အ​ရှည်​အ​နေ​အ​ထား​ကို​လည်း ​ထိတ်​လန့်​စွာ ​အ​နီး​ကပ် ​မြင်​လိုက်​ရ​၏။ ​ကျစ်​ကျစ်​မာ​မာ ​အ​သား​စိုင် ​ပူ​ပူ​နွေး​နွေး ​အစ်​ကို့​လီး​ကို ​ကိုင်​လျက် ​ခပ်​နာ​နာ​လေး ​ဖိ​ပွတ်​ပေး​လိုက်​လေ​၏။
‘‘ြွ​ပတ် . .ြွ​ပတ် . . ​ဖွတ် . . ​ပ​လွတ် . .ြွ​ပတ်’’
​လီး​ထိပ်​မှ ​သံ​စုံ​ထွက်​လာ​သည်။ ​မိ​ချော ​သိမ့်​က​နဲ ​ကြည်​နူး​ဆွတ်​ပျံ့​သော ​ဝေ​ဒ​နာ​တစ်​မျိုး​ကို ​ခံ​စား​လိုက်​ရ​လေ​သည်။ ​ဆန့်​ကျင်​ဘက်​လိင်​မှ ​ထွက်​လာ​သော ​အ​သံ​သည် ​တ​မျိုး​ပင် ​ခံ​စား​ရ​သော ​အ​သံ​တစ်​မျိုး​လေ​လား​မ​သိ​ပါ။
‘‘​အ . . ​နာ​တယ် . . ​မိ​ချော​ရဲ့ . . ​အ​ရမ်း ​မ​ဖြဲ​နဲ့’’ ​အစ်​ကို​က ​နာ​နာ​ကျင်​ကျင် ​ပြော​မှ ​မိ​ချော ​ရပ်​လိုက်​သည်။ ​ထို့​အ​တူ ​အစ်​ကို့​ဖင်​ကြီး​အောက်​ဆီ​သို့ ​ရွေ​လျှား​သွား​သည်။ ​နွေး​ထွေး​သော ​ဂွေး​ဥ​ကြီး​များ​က ​မိ​ချော ​ခန်​ဓာ​ကိုယ်​ကို ​ပွတ်​တိုက်​သွား​လေ​သည်။ ​မိ​ချော ​လက်​နှစ်​ဖက်​ကို ​အား​ပြု​ပြီး ​တစ်​ဆစ်​ချိုး ​ချိုး​ထား​၏။ ​အစ်​ကို​က ​သူ့​လီး​ကို ​အ​သေ​အ​ချာ​ကိုင်​ပြီး ​အ​ပေါက်​ကို ​စမ်း​တ​ဝါး​ဝါး ​တေ့​နေ​ပြန်​၏။ ​မိ​ချော ​သိပ်​စိတ်​မ​ရှည်​ချင်​တော့​ပေ။
‘‘​ကျွတ် . . ​ဒီ​မှာ . . ​ဒီ​မှာ . . ​ကဲ ​တွေ့​ပြီ​လား’’
​စောက်​ပတ်ဝ​နှင့် ​လီး​ထိပ်​က ​ပု​လင်းဝ​နှင့် ​အ​စို့​လို ​ဖိ​ကပ်​မိ​သွား​သည်။ ​သည်​မှာ ​မိ​ချော ​မျက်​တောင်​လေး ​မှေး​စင်း​သွား​သည်​အ​ထိ ​အီ​စိမ့် ​ချို​မြိန်​သော ​အ​ထိ​အ​တွေ့။
‘‘​ဘွတ် . . .​ဘွတ်’’
‘‘​အား . . . ​ဝင်​သွား​ပြီ . . ​အီး . . ​ရှီး ​ကျွတ် ​ကျွတ်’’
​လီး​ထိပ်​က ​ဆိုင်း​မ​ဆင့် ​ဗုံ​မ​ဆင့် ​ကျွံ​ဝင်​သွား​သည်။ ​မိ​ချော​၏ ​ဖင်​ကြီး ​နောက်​သို့ ​တွန့်​က​နဲ ​ရွှေ့​သွား​သည်။ ​အစ်​ကို့​ခြေ​ထောက်​နှစ်​ဖက်​က ​မိ​ချော​တင်​ပါး​နှစ်​လုံး​ကို ​ဖ​နောင့်​နှင့် ​ဖိ​ကပ် ​ဆွဲ​ထား​လိုက်​ရာ ​ဖင်​ကြီး​မှာ ​ရွှေ့​မ​ရ​တော့​ပေ။
‘‘​ဘွတ် . . .​ဘွတ် . . ​ဘွတ်ြွ​ပတ်’’
‘‘​အို . . ​အ . . ​အိုး . . ​အ . . ​အ . . ​ဟာ့ . . ​အား . . ​ကျွတ်’’
​ဘွတ်​က​နဲ ​လီး​ထိပ်​ဝင်​သွား​သည်​နှင့် ​အ​ရည်​စို​စ​ပြု​နေ​သော ​မိ​ချော​၏ ​စောက်​ခေါင်း​ထဲ​မှ ‘‘ ​ဘွပ် ’’ ​က​နဲ ​အန်​ထွက်​လာ​ပြီး ‘‘ြွ​ပတ် ’’ ​က​နဲ ​ဟူ​သော ​အ​သံ​နှင်​အ​တူ ​နွေး​အိ​သော ​အ​ရည်​ချွဲ​ချွဲ​များ ​လျှံ​ထွက်​ခြင်း​ကို ​သိ​ရှိ​ခံ​စား​လိုက်​ရ​လေ​သည်။
​အ​သစ်​ချပ်​ချွတ် ​ပါ​ကင်​မ​ဖွင့်​ရ​သေး​သော ​မိ​ချော​၏ ​စောက်​ပတ်​က​လေး​မှာ ​တင်း​က​နဲ ​ကြပ်​စည်း​ခံ​ရ​သ​လို​ပင် ​ဖြစ်​သွား​ရ​၏။ ​အ​တွင်း​ပိုင်း ​စောက်​ခေါင်း​ထဲ​မှ ​အ​လိုး​ခံ​ရ​ခြင်း ​အ​ရ​သာ​၏ ​ကောင်း​မွန်​ခြင်း ​ကြည်​နူး​ခြင်း​ကို ​လီး​ထိပ်​ကြီး​မှ ​လက်​ခံ​ရ​ရှိ​လိုက်​လေ​သည်။
‘‘​ဘွတ် . . .​ဘွတ် . . ​စွတ် . .ြွ​ပတ်’’
​ထွန်း​ဇော် ​နှစ်​ချက်​ဆင့်​၍ ​ခပ်​ဖိ​ဖိ​လေး ​ဆောင့်​ပေး​လိုက်​၏။ ​လီး​ထိပ်​မှ ​န​င့်​က​နဲ​နေ​အောင် ​တစ်​စုံ​တစ်​ခု​နှင့် ​ဆော​င့်​မိ​၏။
‘‘​အ . . ​အစ်​ကို . . ’’
​မိ​ချော ​အ​သက်​ရှု​ရပ်​သွား​သည်။ ​မျက်​လုံး​ထဲ ​ပြာ​က​နဲ ​ဝင်း​က​နဲ ​ဖြစ်​သွား​၏။ ​ကြား​ဖူး​နားဝ​ဖြင့် ​စဉ်း​စား​မိ​သည်။
‘‘​အ​ပျို​မှေး . . ​ပေါက်​သွား​တာ’’
​ဟုတ်​လား . . ​မ​ဟုတ်​လား ​မ​သိ၊ ​နှစ်​ဦး​သား ​အ​တည်​ပြု​သ​လို ​ဆက်​လိုး​ကြ​သည်။ ​ထွန်း​ဇော် ​ယော​က်ျား​လေး​စိတ်​ထဲ​၌ ​ဘယ်​သူ ​တစ်​ဦး​တစ်​ယောက်​မျှ ​မ​ဖိုက်​ရ​သေး​သော ​စောက်​ဖုတ်​လေး​ကို ​လှ​ပ​သော ​ဘီ​ယာ​ဘူး​အ​သစ်​က​လေး ​ဖောက်​လိုက်​ရ​သ​လို ​ကျေ​နပ်​သွား​၏။
​မိ​ချော​က​လည်း ​ဒါ​ကို​တော့ ​လေ့​လာ​ဘူး​သည်။ ​အ​ပေါက်​သစ်​ကို​မှ ​ချစ်​တတ်​ကြ​သော
​ယောက်ျား​လေး​တွေ​၏ ​ညာဉ်​ကို ​သိ​ထား​၏။ ​ထို့​ကြောင့်​လည်း ​ဟုတ်​သည်​ဖြစ်​စေ၊ ​မ​ဟုတ်​သည်​ဖြစ်​စေ ​အ​ပျို​မှေး​ပေါက်​သွား​ပြီ​ဟု ​သံ​ယောင် ​ထည့်​လိုက်​ခြင်း ​ဖြစ်​သည်။ ​ဤ​အ​သံ​ကြား​မှ ​ထွန်း​ဇော် ​အား​ထည့်​ပြီး ​ကြုံး​တော့​သည်။
‘‘​ဘွတ် . . .​ဘွတ် . . ​ဖွတ် . . ​ဖတ်’’
‘‘​အင့် . . ​အင့် . . ​အင့် . . ​အ . . ​အား . . ​ဟ . . ​လား​လား’’
​မိ​ရွှေ​ချော​တစ်​ယောက် ​ကိုယ့်​အ​တတ်​နှင့် ​ကိုယ်​စူး​ပြီ၊ ​နင့်​နေ​အောင် ​ခံ​ရ​သည့် ​ပေါင်​နှစ်​ဖက်​က ​ကား​ပြီး ​အ​ပေါ်​သို့ ​ဖြဲ​ထောင်​ထား​ရာ ​ဆီး​ခုံ​က ​မောက်​တင်း​လျက် ​ခပ်​မို့​မို့​လေး ​ကော့​တင်​ပေး​သ​လို​ဖြစ်​၏။ ​ကု​တင်​မ​ဟုတ်၊ ​ကြမ်း​မ​ဟုတ်။ ​က​တ္တ​ရာ​လမ်း ​မာ​မာ​မှာ ​ထင်​တိုင်း​ဆောင့်​နိုင်​၏။( ​မြေ​ကြီး​၌ ​ဖိုက်​ရ​သော ​အ​ရ​သာ​နှ​င့် ​တောင်​ဆုပ်​ခန့် ​ထူ​သော ​ဖဲ​မွေ့​ယာ​ပေါ်​၌ ​ဖိုက်​ရ​သော ​အ​ရ​သာ​မှာ ​အ​ပျော့ ​အ​မာ ​ခံ​အား ​ဆောင့်​အား ​ကွာ​လွန်း​လှ​သည်။ ​အောက်​ခံ​က ​မာ​နေ​လျှင် ​တင်​ပါး​အ​သား​ဆိုင်​တို့​၏ ​ရုန်း​ကန်​ပြန်​ကြွ​ပေး​မှု ​အ​ရ​သာ​ကို ​ပို​ပြီး ​ထိ​ထိ​မိ​မိ ​ခံ​စား​သိ​ရှိ​နိုင်​၏ … ​စ​ကား​ချပ် ။ )
​ယ​ခု ​မိ​ချော ​နင့်​နေ​အောင် ​အ​လိုး​ခံ​ရ​သည်။ ​စောက်​ပတ်​ထဲ​မှ ​ကျင်​တက်​သွား​အောင်​ထိ​သည်။ ​ဆောင့်​ချက်​တိုင်း​က ​အား​ပါ​၏။ ​ကြီး​မား​လှ​သော ​ဖင်​သား​ကြီး​များ​သာ ​မ​ရှိ​ပါ​က ​အ​ရိုး​တွေ ​အ​မှုန့် ​ဖြစ်​ကုန်​မ​လား​ဟု ​မ​ဆို​နိုင်​ချေ။
‘‘​အစ်​ကို ​က ​အ​ဆုံး​ထိ ​ဆောင့်​တာ​ပဲ . . ​တ​ခါ​ထဲ . . ​အင့်’’
‘‘​နာ​တာ​ပေါ့ ​အ​သက်​အော​င့်​ထား​ရ​တာ . . ​အ​သက်​ရှု​ဖို့​တောင် ​အ​ချိန်​မ​ရ​တော့​ဘူး . . ​အား​ကြီး ​ကြမ်း​တာ​ပဲ’’
​ငို​သံ​လို​လို ​ဒေါ​သ​သံ​လို​လို ​ပြော​လိုက်​သော ​မိ​ချော​စ​ကား​ကြောင့် ​ထွန်း​ဇော် ​အ​ကြမ်း​ဆုံး​သော ​ဆောင့်​အား​မှ ​ကပ်​ညောင့်​လိုး​နည်း​သို့ ​ပြောင်း​လိုက်​လေ​သည်။
‘‘​ဘွတ် . . .​ဘွတ် . . ​စွတ် . . ​ဘွတ် . . ​စွတ်’’
‘‘​အင့် . . ​အင့် . . ​အဲ့ . . ​အဲ​ဒါ​က ​တော်​သေး​တယ် ​တ​ခါ​တည်း​များ ​အ​သက်​ရှု​လို့​ကို ​မ​ရ​ဘူး’’
‘‘ြွ​ပတ် . . ​ဘွတ် . . .​ဘွတ် . .’’
‘‘​ဟ . . ​အ . . ​အိုး . . ​အိုး . .​အ​ဆုံး​ချည်း​ဝင်​တာ​ပဲ​ကွယ်’’
​လီး​မွှေး​ကြမ်း​ကြမ်း​ကြီး​များ​က ​မိ​ချော​ရဲ့ ​စောက်​မွှေး​အုံ​လေး​ကို ​ခပ်​ဖိ​ဖိ​လေး ​ဖိ​ကြိတ်​ပြီး ​ညောင့်​နေ​သည်။
​ဗြိ ​က​နဲ ​ဗြိ ​က​နဲ ​အ​မွှေး​ချင်း ​ဖိ​ကြိတ်​သံ​က ​တစ်​ခါ​တစ်​လေ ​ခပ်​ကျယ်​ကျယ်​လေး ​ထွက်​ထွက်​လာ​တတ်​လေ​၏။
‘‘​အ . . ​အစ်​ကို ​အ​ရမ်း​အ​ဆောင့်​သန်​တယ် . . ​ကျွတ် . . ​ကျွတ် . . ’’
‘‘​ဆောင့်​တာ ​မိ​ချော ​မ​ကြိုက်​ဘူး​လား​ဟင်’’
‘‘​ဆီး​ခုံ​နာ​တယ် ​ဘာ​မှန်း​လည်း ​မ​သိ​ဘူး၊ ​အ​ရ​သာ​မှ ​မ​ရှိ​တာ ​စွတ်​ညောင့်​နေ​တာ​ပဲ ​မုန်း​တယ်’’
​ပါး​စပ်​က​လေး ​ရဲ​ရဲ​ဖြင့် ​နှစ်​ကိုယ်​ကြား ​တိုး​တိုး​လေး ​ပြော​နေ​သော ​မိ​ချော​အ​သံ​က ​လေ​သံ​လေး​မျှ​သာ​ဖြစ်​၏။
‘‘​ဟာ ​အစ်​ကို​က​လည်း . . . ​သွား ​မ​သိ​ဘူး’’
‘‘​ဟိ ​ဟိ ​တော်​ကွာ ​မ​မေး​နဲ့ ​ရှက်​တယ်’’
‘‘​အ . . ​အင့် . . ​ဟင့် . . ​အင့် . . ​အင့် . . ​အား ​ကျွတ် ​ကျွတ်’’
​စောက်​ပတ်​ထဲ ​လီး​ဝင်​နေ​စဉ် ​နို့​အ​စို့​ခံ​ရ​သော ​အ​ရ​သာ​မှာ ​မိန်း​ခ​လေး​တစ်​ဦး​အ​တွက် ​အ​မြင့်​ဆုံး ​ခံ​စား​မှု​ပင် ​ဖြစ်​သ​တည်း။
‘‘​ရှီး . . ​အား . . ​ကျွတ် . . ​ကျွတ် . . ​အီး . . ​အား . . ​အစ်​ကို . . ​ဖယ် . . ​ဖယ်​တော့ . . ’’
‘‘​ဟာ ​ဘာ​လို့​ဖယ်​ရ​မှာ​လဲ . .ြွ​ပတ် . .ြွ​ပတ်’’
‘‘​အာ . . ​ဒီ​မှာ ​ထွက် . . ​ထွက်​ကုန်​တော့​မယ် ​ဖယ်​ပါ​ဆို’’
‘‘​ထွက် . . ​ထွက် . .ြွ​ပတ် . .ြွ​ပတ်’’
‘‘​ဟင့်​အင်း . . ​အား ​ဒုက်​ခ​ပါ​ပဲ . . ​ရှီး . .ြွ​ပတ် . .ြွ​ပတ် . . ​ဘွတ်’’
​အား . . ​အား . . ​အား . . ​မိ​ချော​အ​သံ ​အ​နည်း​ငယ် ​ကျယ်​သွား​သည်။ ​ဘတ်စ်​ကား​ဆီ​မှ ​လူ​သံ ​သဲ့​သဲ့ ​ကြား​လိုက်​ရ​သည်။
‘‘​အို ​ကြား ​ကြား ​မ​တတ်​နိုင်​ဘူး . . ​အား ​အား’’
​ကောင်​မ​လေး ​စွတ်​အော်​နေ​ပြန်​သည်။ ‘‘​ဖြင်း’’ ​က​နဲ ​ရှိန်း​တက်​သွား​ရ​သော ​ခံ​စား​မှု​နှင့်​အ​တူ ​လီး​ထိပ်​မှ ​အား​ရ​ပြည့်ဝ​သော ​ခံ​စား​မှု ​သုတ်​ရည်​များ ​ဇိ​က​နဲ ​ဇိ​က​နဲ ​မိ​ချော​လေး​၏ ​စောက်​ခေါင်း​အ​ဆုံး​၌ ​စိမ်​ထား​ရင်း ​ပန်း​ထည့်​ပစ်​လိုက်​တော့​သည်။ ​မိ​ချော​၏ ​စောက်​ပတ်​လေး​ထဲ ​နွေး​က​နဲ ​နွေး​က​နဲ ​ခံ​စား​လိုက်​ရ​ပြီး ​နှစ်​ယောက်​သား ​အ​သား​ချင်း ​ဖိ​ကပ်​ပူ​ထား​ရင်း ​ရွ​စိ ​ရွ​စိ​ဖြင့် ​အ​ရှိန်​မ​သေ​သေး​သ​လို ​ကပ်​ဆောင့်​ရင်း ​ညောင့်​ရင်း ​ကာ​မ​အ​ရ​သာ​ကို ​အ​ပြည့်​အဝ ​ခံ​စား​လိုက်​ကြ​ရ​လေ​သည်။
​လူ​သူ​ကင်း​မဲ့​သော ​ဟိုင်း​ဝေး​လမ်း​မ​ကြီး​ပေါ်​မှ ​အ​ပျို​စင်​မ​လေး​၏ ​သွေး​ကွက်​လေး​ကို​တော့​ဖြင့် ​မည်​သူ​မျှ ​ရေး​ကြီး​ခွင်​ကျယ် ​သ​တိ​ထား​မိ​ကြ​လိမ့်​မည် ​မ​ဟုတ်​ပါ​ချေ၊
‘‘​မိ​ချော​ကို . . . ​ကို ​မေ့​လိုက်​ပါ ​နော်’’
​ပိုက်​ဆံ​အိတ်​လေး​လာ​ယူ​ရင်း ​ကား​ပေါ်​က ​အ​ဆင်း​၌ ​မိ​ချော ​ကပ်​ပြော​သည်။ ​ထွန်း​ဇော် ​လှိုက်​ကျင်​သော ​ခံ​စား​မှု​ကို ​ခံ​စား​ရ​သည်။
‘‘​မိ​ချော​တို့ ​ရွာ​ကို ​ပြော​ပြ​ခဲ့​ဦး​လေ . . ’’
‘‘​အို . . ​အ​ပို​တွေ’’
​မိ​ချော ​မျက်​နှာ​ထား ​တင်း​တင်း​လေး​ဖြင့် ​တစ်​ချက်​ဟောက်​ပြီး ​ဆင်း​သွား​သည်။ ​ကား​လမ်း​ဘေး​ရှိ ​ဖုံ​ထ​နေ​သော ​လှည်း​လမ်း​မ​အ​ထိ ​နောက်​မှ​ကြည့်​ပြီး ​တန်း​ပြေး​သွား​သည်။
‘‘​မောင်း . . ​ဆ​ရာ​ရေ့ ​မောင်း’’
‘‘​အမ် . . ​ရော​ဂါ​ကျွမ်း​နေ​ပြီ’’
‘‘ . . . . . ’’
‘‘​ကျွန်​တော် ​မောင်း​လို့​မ​ရ​တော့​ဘူး ​ကို​စံ​လှ’’
​ငို​သံ​ပါ​ကြီး​နှင့် ​ပြော​လိုက်​သော ​ထွန်း​ဇော်​ကို ​စံ​လှ ​သက်​ပြင်း​ချ​ရင်း ​ကြည့်​သည်။
‘‘​ခက်​ပြီ ​ကဲ​ဖယ် ​ငါ​ပဲ ​မောင်း​မယ်’’
​စ​ပယ်​ယာ​စံ​လှ ​ဒ​ရိုင်​ဘာ ​ထိုင်​ခုံ​၌ ​ဝင်​ထိုင်​ပြီး ​မောင်း​၏။ ​ရေး​ရေး​ပျ​ပျ ​မိ​ချော​၏ ​သ​ဏ္ဍန်​လေး​ကို ​ထွန်း​ဇော် ​လွမ်း​ဆွတ်​ကြေ​ကွဲ​စွာ ​နောက်​ဆုံး​ငေး​နေ​မိ​ခဲ့​သည်။ ​ကား​သည် ​အိုး​သည်​ကုန်း​ကို ​ကျော်​လ​ပြီး ​ဖြစ်​သည်။ ​ခ​ရီး​သည် ​တစ်​ယောက်​မျှ ​မ​ကျန်​တော့။
‘‘​ငါ ​ငယ်​ငယ်​က ​အ​ခု ​သွင်​ရုံ​မှာ ​ရုပ်​ရှင်​စ​ပြီး ​ကြည့်​ဘူး​တယ်၊ ​နောက် ​နှစ်​နှစ်​လောက်​အ​ထိ ​သွင်​ရုံ​မှာ​ပဲ ​ကြည့်​တယ်၊ ​သွင်​ရုံ​ကို​ပဲ ​ကြိုက်​တယ်၊ ​နောက် ​လည်​လာ​တော့ ​ပ​ပ​ဝင်း​ရုံ ​ကြည့်​တယ်၊ ​သွင်​ရုံ​ကို ​မ​သွား​တော့​ဘူး၊ ​နောက် ​သ​မ္မ​တ ​မှာ​ပဲ ​ကြည့်​တယ်၊ ​ဘယ်​ရုံ​မှ ​မ​သွား​ဘူး။ ​အ​ခု ​ရန်​ကုန်​တစ်​မြို့​လုံး​ကို ​ငါ​ကြည့်​တယ်၊ ​ရုံ ​မ​ရွေး​တော့​ဘူး၊ ​ဘယ်​ရုံ​ဖြစ်​ဖြစ် ​ကြည့်​တယ်၊ ​မိန်း​မ​လဲ ​ဒီ​လို​ပါ​ပဲ ​ဇော်​ကြီး၊
​သာ​တာ​မ​တွေ့​သေး​တော့ . . ​ဟင်း ​ဟင်း’’
​ကား​ကို ​မောင်း​ရင်း​က ​စံ​လှ ​လူ​လည်​ကျ​နေ​၏။ ​ထွန်း​ဇော် ​အံ​ကို ​ကြိတ်​ထား​သည်။ ​မ​ချစ်​ဘူး​သော ​အ​သည်း​၌ . . ​အ​ပြစ်​အ​နာ​အ​ဆာ​ကင်း​သော ​အ​သည်း​သန့်​သန့်​လေး​ပေါ်​၌ ​အ​မာ​ရွတ် ​ထင်​စေ​သော ​အ​ချစ်​င​ရဲ​မီး​ကို ​သွန်း​လောင်း​ချ​ပေး​သွား​သော ​အ​ဆိပ်​ပန်း​မ​လေး ​မ​ရွှေ​ချော . .
​ပြန်​လည်​ဆုံ​စည်း​ခဲ့​သည်​ရှိ​သော် . . . . . ။
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ‘‘​ဟေ့​ကောင် ​ထွန်း​ဇော် ​ငါ ​ဒီ​မှာ​ကွ’’
‘‘​လ​ခွေး​မှ​ပဲ ​မင်း ​က​လပ်စ်​က​လည်း ​မ​ပြီး​သေး​ဘဲ​နဲ့’’
​မျက်​မှန်​ထူ​ထူ​နှင့် ​အင်း​တီ ​ခေါ် ​တ​ရုပ်​က ​ထွန်း​ဇော်​ဘေး ​ဝင်​ထိုင်​သည်။ ​အင်း​တီ​နှင့် ​အ​တူ ​အ​တန်း​တူ ​ကျောင်း​သား​တစ်​ဦး​ဖြစ်​သော ​စာ​ဂျ​ပိုး​လေး ​ခင်​မောင်​ထွန်း​လည်း ​ပါ​လာ​သည်။
‘‘​မင်း​တို့​က ​ဘာ​လို့ ​ငါ့​ကို ​ရှာ​နေ​ရ​တာ​တုန်း ​ဆို​စမ်း​ပါ​ဦး’’
’’​ကား . . ​ကား ​ကိ​စ္စ ​ပြော​ချင်​လို့ .. ’’
‘‘ ​ငှား​မ​လို့​ပေါ့​ကွ .. ​ဝယ်​နိုင်​မှ​တော့ ​မင်း​ဆီ ​လာ​မ​လား’’
‘‘​အင်း ​ပြော​လေ ​ဘယ်​သွား​မှာ​လဲ’’
‘‘​ဘယ်​မှ ​မ​သွား​ဘူး ​အိမ်​ပြန်​မှာ’’
‘‘​ဒါ​ပေါ့ .. ​တို့​လေး​ယောက်​တည်း’’
‘‘​လေး​ယောက်​က ​မင်း​ရယ် . . ​ခင်​မောင်​ထွေး​ရယ် . . ’’
​စ​တယ်​လာ​က ​ဂွမ်း​လေး​လို ​ဖြူ​နု​သည်။ ​ကျောက်​သား​လေး​နယ် ​မွတ်​ညက်​သည်။ ​သ​လင်း​ကျောက်​လေး​နှယ်
​ကြည်​လဲ့​နေ​သည်။ ​အ​ဝေး​မှ ​ကြည့်​ရုံ​မျှ​ဖြင့် ​ထင်း​က​နဲ ​ပေါ်​လွင်​နေ​သည်။ ​သို့​သော် ၂၀ ​ရာ​စု​ကို ​ကျော်​လွန်​ပြီး ၂၅ ​ရာ​စု ​ဆီ​သို့ ​ခြေ​လှမ်း​ကျွံ​ထွက်​နေ​အောင် ​ရှေ့​မှ​ပြေး​နေ​သူ​လေး​ပင်​တည်း။
‘‘​ကိုင်း ​မ​နက်​ဖြန်​က​စ​ပြီး ​ကြို​ပို့​နော်’’
‘‘​အ​ချစ် ​ကြို​ပို့​ကျောင်း​ကား​လို့ ​ရေး​ထား​ရ​မှာ​ပေါ့​နော်’’
‘‘​မင့်​မ​အေ . . ​အ​ချစ်​ကြို​ပို့​လား’’
​ခင်​မောင်​ထွေး​က ​ရုတ်​တ​ရက် ​ရယ်​လိုက်​ပြီး​မှ ​သူ့​အစ်​မ​ပါ​ကြောင်း ​သ​တိ​ရ​သွား​ပြီး ​ထွန်း​ဇော်​ကို ​မ​ကျေ​မ​နပ် ​ကြည့်​ကာ ​ထွက်​သွား​လေ​တော့​သည်။
‘‘​ကား​ပေါ်​က ​ကို​ဇော်​ကြီး ​ရည်း​စား​လား​ဟင်’’
‘‘​ဟာ ​ဟိတ် ​ကြား​သွား​ပါ​ဦး​မယ် ​ဓါတ်​ဆီ ​ပေး​စမ်း​ပါ’’
‘‘​ချော​လိုက်​တာ​နော် ​ကို​ဇော်​ကြီး ​မိတ်​ဆက်​ပေး​ပါ​လား’’
‘‘​အ​ရေး​မ​ပါ​တာ ​ရီ​နွယ်​ရာ ​လုပ် . . ​လုပ်​စမ်း​ပါ ​အာ​ပ​လာ​တွေ​ပါ၊ ​ငါ့​ကား​ငှား​စီး​တာ​ပဲ​ကြည့်​လေ ​ဟင်း​ဟင်း’’
​ရီ​နွယ် ​ဂါ​လံ​ခွက်​ကြီး​ကိုင်​ပြီး ​စ​တယ်​လာ​ကို ​ငေး​နေ​မိ​၏။
‘‘​ခ​လုတ်​တိုက်​ပြီး ​ဂန့်​နေ​ဦး​မယ် ​အောက်​ကြည့်’’
​စ​တယ်​လာ​နှင့်​စာ​လျှင် ​ရီ​နွယ့်​၏ ​အ​လှ​က​မှ ​အ​ကြည့်​ခံ​နေ​သေး​၏။ ​စ​တယ်​လာ့ ​အ​လှ​က ​သစ်​လွင်​တောက်​ပ​သော ​အ​လှ​ဟု​တော့ ​ဆို​နိုင်​ပေ​သည်။
​ငြိမ်း​ငြိမ်း​ဆို​သော ​ခင်​မောင်​ထွေး​အစ်​မ​က ​အ​နည်း​ငယ် ​ရင့်​ကျက်​သ​ယောင်​ရှိ​သည်။ ​ပြာ​လွင်​သော ​မျက်​လုံး​လေး​များ​က ​ထာဝ​စဉ် ​ရှက်​ရွံ့​စွာ ​ငုတ်​လျှိုး​နေ​တတ်​သည်။ ​ထွန်း​ဇော် ​သ​တိ​ထား​မိ​သည်။ ​အင်း ​နှင်း​ဆီ​နဲ့ ​ခ​ရေ​လို ​အ​လှ​မျိုး . . . ။
​အင်း​တီ​နှင့် ​ခင်​မောင်​ထွေး ​ဂျီ​ကျ​နေ​သ​ဖြင့် ​ဓါတ်​ဆီ​ပင် ​ဝယ်​မ​ထည့်​ခဲ့​ရ​ပဲ ​ရီ​နွယ်​တို့​ဆိုင် ​ရောက်​မှ ​ဝယ်​ထည့်​ရ​သည်။ ​အ​မေ​ဝိုင်း​က ​စူး​စမ်း​သော ​မျက်​လုံး​များ​နှင့် ​ထွန်း​ဇော်​ကို ​ကြည့်​သည်။
​သည်​အ​ကြည့်​ကို​လည်း ​ထွန်း​ဇော် ​နား​လည်​နေ​သည်။ ​ထို့​ကြောင့် ​အ​ရှက်​ပြေ ​ဟက်​က​နဲ ​ရယ်​ရင်း . . ။
‘‘​ကျောင်း​ကား ​ဖြစ်​နေ​ပြန်​ပြီ ​အ​မေ​ဝိုင်း​ရေ’’ ​အ​မေ​ဝိုင်း​က ​မဲ့​ပြီး ​ခေါင်း​ငြိမ့်​ပြ​သည်။
‘‘​ဟေ့​ကောင် ​လုပ်​ဟ ​မြန်​မြန်’’
‘‘​လာ​ပါ​ပြီ​ကွ ​မင်း​တို့​က​လည်း ​ခု​မှ ​ခု​နှစ်​နာ​ရီ​ခွဲ​သေး​တာ’’
​ခင်​မောင်​ထွေး ​ပေါ်​တာ​ကတ် ​ဦး​ခေါင်း​မှ ​လှမ်း​၍​အော်​၏။ ​ထွန်း​ဇော် ​ရီ​နွယ့်​လက်​ထဲ​မှ ​ဂါ​လံ​ခွက်​ကို ​ယူ​ပြီး ​ဆီ​ထည့်​သည်။
‘‘​အင်​ဂျင်​ဝိုင် ​မ​ရော​တော့​ဘူး​လား ​ကို​ဇော်’’
‘‘​ရှိ​သေး​တယ်​ဟ ​တစ်​ပု​လင်း ​ဒီ​မှာ’’
​ဒ​ရိုင်​ဘာ​နောက်​ခုံ​မှ ​အင်​ဂျင်​ဝိုင်​ပု​လင်း​ကို ​ဓါတ်​ဆီ​တိုင်​ကီ​ထဲ ​ရော​ပေး​လိုက်​သည်။
‘‘​ဓါတ်​ဆီ​နဲ့ ​ရော​ထည့်​ရ​လား​ဟင်’’ ​အံ့​သြ​ဟန်​ဖြင့် ​စ​တယ်​လာ​က ​မေး​သည်။
‘‘​ဟမ်း​ဘီး၊ ​ဒိုင်​ဟာ့​စု​နဲ့ ​ပေါ်​တာ​ကတ်​က ​အင်​ဂျင်​ဝိုင်​နဲ့ ​ဓါတ်​ဆီ ​ရော​ကျွေး​ရ​တာ​ချည်း​ပဲ​လေ’’
‘‘​အော် ​ခု​မှ ​သိ​တာ’’
​စ​တယ်​လာ​နှင့် ​စ​ကား​ပြော​ဖြစ်​သွား​သည်။ ​ရီ​နွယ်​က ​ဘာ​မှန်း​မ​သိ ​ထွန်း​ဇော်​လက်​ထဲ​မှ ​ဂါ​လံ​ခွက်​ကို ​ဆတ်​က​နဲ ​ဆော​င့်​ယူ​ပြီး ​ဆောင့် . . ​ဆောင့်​နှင့် ​ထွက်​သွား​လေ​၏။
‘‘​အ​ဟီး ​ကို​ဇော်​ကြီး ​သူ​က ​ဒီ​ဆိုင်​က​လား’’
​ခင်​မောင်​ထွေး​က ​စပ်​ဖြဲ​ဖြဲ ​မျက်​နှာ​ပေး​ဖြင့် ​မေး​လိုက်​သည်။
‘‘​အင်း ​ဓါတ်​ဆီ​ရောင်း​တဲ့ ​အ​မေ​ဝိုင်း​သ​မီး​လေ’’
​အင်း​တီ​က ​ကား​နောက်​ခန်း​မှ ​လှမ်း​အော်​သည်။
‘‘​ဟိတ်​ကောင် ​နှာ​ဘူး ​စွတ်​ပြော​မ​နေ​နဲ့ ​ကို​ဇော်​ကြီး ​ပ​စ္စည်း​ဖြစ်​နေ​ရင် ​မျက်​နှာ​ပူ​စ​ရာ​ကြီး’’ ‘‘​ဟာ​ကွာ . . ’’
‘‘​ည​နေ​ကို ​မာ​လာ​ဘက် ​ခ​ဏ​သွား​ကြ​မယ်​နော်’’
‘‘​ရ​တယ်​လေ ​က​လပ်စ်​ပြီး​မှ ​မ​ဟုတ်​လား’’
‘‘​အင်း​ပေါ့ .. ​ငြိမ်း ​သူ​ငယ်​ချင်း​တစ်​ယောက်​နဲ့ ​ချိန်း​ထား​လို့’’
​အင်း​တီ​ကို ​သာ​မန်​လေ​သံ​နှင့် ​ပြော​နေ​သော်​လည်း ​စ​တယ်​လာ​က ​တစ်​စုံ​တစ်​ရာ ​နောက်​ပြောင်​ရန် ​ပါး​စပ်​ပြင်​နေ​သည်။
‘‘​ဗျို့ ​ကား​ဆ​ရာ ​ည​နေ ​ချိန်း​ထား​တာ​ရှိ​တယ်​နော် ​မ​မေ့​နဲ့’’
​ကား​စက်​သံ​နှင့် ​မ​ရှင်း​သော ​ဇော်​ကြီး​က ​လှည့်​မေး​၏။ ​စ​တယ်​လာ ​ခွက်​ထိုး​ခွက်​လန်​လေး ​ရယ်​နေ​သည်။
‘‘​အင်း . . ​ဒါ . . ​ဒါ ​ရယ်​စ​ရာ​လား ​ဟဲ့’’
​အင်း​တီ​က ​မျက်​နှာ​ထိ ​မျက်​နှာ​ထား​အ​ပြော​ကြောင့် ​စ​တယ်​လာ့​မျက်​နှာ ​ဘ​ရိတ်​ဆောင့်​နင်း​ခြင်း ​ခံ​လိုက်​ရ​သော ​တို​ယို​တာ​ကား​နှယ် ​ခေါင်း​လေး​ငုံ့​ပြီး ​အ​ရယ်​ရပ်​သွား​၏။
‘‘​ဒီ​ည ​စ​တိတ်​ရှိုး​လက်​မှတ် ​ရ​လာ​တယ်​ဟေ့’’
‘‘​အို ​ဘယ်​မ​လဲ .. ​သုံး​စောင်​တည်း’’
​စ​တယ်​လာ​က ​စိတ်​ပျက်​သ​လို ​ညည်း​၏။
‘‘​စ​တယ်​လာ​တို့ ​သွား​ကြ​ပါ ​ငြိမ်း​က ​အိပ်​ရေး​ပျက်​သိပ်​မ​ခံ​နိုင်​ဘူး’’
​ငြိမ်း​ငြိမ်း​က ​လက်​မှတ်​သုံး​စောင်​ကို ​တစ်​ချက်​ဝေ့​ကြည့်​လိုက်​ပြီး ​ပြော​သည်။ ‘‘​ဟယ် . . ​အယ် . . ​မ​ဟုတ်​တာ ​ဒါ​ဆို ​အ​ဟီး . . ​ငါ​တို့​ပဲ ​သွား​ရ​မှာ​ပေါ့’’ ​စ​တယ်​လာ့​စ​ကား​ကြောင့် ​ခင်​မောင်​ထွေး ​ခ​မျာ​မှာ ​ပျာ​ပျာ​သ​လဲ ​ဖြစ်​သွား​ရ​၏။
​ထို​စဉ် ​ပါ​ဝါ​မျက်​မှန်​လေး​ဖြင့် ​သွယ်​လျ​ဖြူ​နွဲ့​သော ​ကျောင်း​သူ​တစ်​ဦး ​ကင်​တင်း​ထဲ​သို့ ​ဝင်​လာ​ရင်း
‘‘​ဟော ​ဖြူ​ရောက်​လာ​ပြီ ​လာ ​ထိုင်’’
​ဖြူ​ဆို​သော ​ပါ​ဝါ​မျက်​မှန်​နှင့် ​မိန်း​က​လေး​က ​တွေ့​နေ​ကျ ​အင်း​တီ​နှင့် ​ခင်​မောင်​ထွေး​ကို ​ပြုံး​ပြ​ရင်း
​အ​ကြည့်​က ​ထွန်း​ဇော​ဆီ ​ရောက်​သွား​သည်။ ​ထွန်း​ဇော်​က ​သောက်​လက်​စ ​ထော​ပတ်​တစ်​ဇွန်း​ကို ​ပါး​စပ်​ထဲ ​ထိုး​သွင်း​ရင်း ​ခပ်​ရေး​ရေး ​ပြုံး​ပြ​ဖြစ်​သည်။ ‘‘​သူ​က ​ကို​ထွန်း​ဇော်​တဲ့ .. ​တို့​အ​ဖွဲ့​ထဲ​က​ပဲ’’ ‘‘​ဟုတ်​လား ​ဒါ​ဆို ​အီ​ကို ​အ​ဖွဲ့​ကြီး​စု​မိ​တာ​ပေါ့’’
​စ​တယ်​လာ​တစ်​ယောက် ​ငြိမ်း​ငြိမ်း​နှင့် ​ဖြူ​တို့​ကြား​၌ ​ထွန်း​ဇော် ​မျက်​နှာ​ငယ်​စွာ ​ကျန်​ရစ်​သည်​ကို ​လှည့်​၍​မျှ​ပင် ​မ​ကြည့်​တော့​ချေ။
‘‘​ဟင် ​စ​တယ်​လာ ​မ​ကြ​ည့်​ဘူး​လား’’
​ဖြူ​က​ပါ ​ငြိမ်း​ငြိမ်း​တို့​နှ​င့်​အ​တူ​လိုက်​မည်​ဖြစ်​လာ​သ​ဖြ​င့် ​အ​စီ​အ​စဉ်​က ​ပြောင်း​သွား​ပြီး
​စ​တယ်​လာ၊​ငြိမ်း​ငြိမ်း​နှ​င့် ​ဖြူ​တို့ ​သုံး​ယောက်​သား ​စ​တိတ်​ရှိုး​ကြ​ည့်​ဖြစ်​သွား​ခြင်း​ဖြစ်​သည်။ .. ​ထွန်း​ဇော်​က ​ကား​ပေါ်​မှာ​ပဲ ​ထိုင်​စော​င့်​ပြီး​တ​ယောက်​ထဲ ​ပျင်း​ပျင်း​နှ​င့်​ကျန်​ခဲ့​စဉ် ​စ​တယ်​လာ​က ​ပြန်​ရောက်​လာ​သည်။
‘‘​ငြိမ်း ​ပျောက်​သွား​လို့ ​ကို​ဇော့်​ကား​ဆီ ​လာ​ကြည့်​တာ’’
‘‘​အ​ပေါ့​အ​ပါး ​သွား​တာ​နေ​မှာ​ပါ ​ကား​ဆီ ​ပြန်​မ​လာ​ပါ​ဘူး’’
​စ​တယ်​လာ​က ​ဘ​လောက်စ်​အ​င်္ကျီ ​လည်​ဟိုက်​လေး​ထဲ​မှ ​ဝင်း​ဝါ​နေ​သော ​ရင်​ညွန့်​လေး ​ပြူ​ထွက်​လာ​သည်​အ​ထိ ​ကုန်း​လိုက်​ရင်း ​ဟန်​လုပ်​ပြီး ​ရယ်​သည်။
‘‘​ဟင်း . . ​ဟင်း ​ယုံ​ပါ​တယ်​နော် ​ဒီ​က ​ငြိမ်း​ကို ​လာ​ရှာ​တာ​ပါ ၊ ​စ​တယ်​လာ ​ကို​ဇော့်​ကို ​စစ်​ဆေး​နေ​တာ ​မ​ဟုတ်​ရ​ပါ​ဘူး​နော် .. ’’
​ကား​ရှေ့​ခန်း​လေး​သည် ​ကြပ်​တီး​ကြပ်​တောင်း ​နိုင်​လှ​သည်။ ​မှောင်​ရိပ်​ကျ​သော ​ကား​ခေါင်း​အ​တွင်း​သို့ ​စ​တယ်​လာ ​ရဲ​တင်း​စွာ ​စွေ့​က​နဲ ​ဝင်​ထိုင်​လိုက်​သည်။ ​ကား​လေး ​ငြိမ့်​က​နဲ ​တုန်​သွား​၏။
‘‘​ကို . . ​ဇော်’’ ​လေ​သံ​အုပ်​အုပ်​ဖြင့် ​ခေါ်​သည်။
‘‘​ဘာ​လဲ . . . ​စ​တယ်​လာ’’
‘‘​ကျောင်း​မှာ ​စ​တယ်​လာ​ကို ​လိုက်​နေ​တဲ့ ​ဘဲ​လေ ​အ​ခု​လိုက်​လာ​တယ်၊ ​စ​တယ်​လာ​က ​အုံ​နာ​ရှိ​တယ်​လို့
​ပြော​ထား​တာ ​မ​ယုံ​ဘူး ​ဟို​မှာ ​လာ​ကြည့်​နေ​ပြီ ​ဒီ​ဘက်​တိုး​နော် ​ခ​ဏ’’ ​ထွန်း​ဇော် ​ရင်​ခုန်​ချိန်​မ​ရ​လိုက် . . . . .
​အိပ်​ပျော်​နေ​စဉ် ​မိုး​ကြိုး​ပစ် ​ခံ​လိုက်​ရ​သည့်​အ​လား ​က​ယောင်​က​တမ်း​ဖြင့် ​အ​တင်း​ဖိ​ကပ်​လာ​သော ​စ​တယ်​လာ ​နှုတ်​ခမ်း​နွေး​နွေး​ကို ​ယောင်​ယမ်း​ပြီး ​စုပ်​လိုက်​ရ​သည်။ ​နှုတ်​ခမ်း​နီ​နံ့ ​သင်း​သင်း​ချို​မြ​သွား​သည်။
​ကား​ဘေး ​မ​နီး​မ​ဝေး​မှ ​အ​ကဲ​ခတ်​ဟန် ​ဆံ​ရှည်​ကိုယ်​တော်​လေး ​နှစ်​ယောက်​ကို ​ထွန်း​ဇော် ​တွေ့​နေ​ရ​သည်။
‘‘​အင်း . . ​အွန်း . .ြွ​ပတ် . .ြွ​ပတ် . . ​စွပ် . . ​အွန်း . .ြွ​ပတ်’’ ​စ​တယ်​လာ​က ​ထွန်း​ဇော် ​နှုတ်​ခမ်း​ကို ​ခပ်​ကြမ်း​ကြမ်း​လေး ​စုပ်​ယူ​သည်။ ​ထွန်း​ဇော် ​ထောင်း​က​နဲ ​ဒိုင်း​က​နဲ ​လေ .. ​ဘာ​တွေ​ဖြစ်​ကုန်​သည်​မ​သိ ​တော့။ ..
​ဟန်​ဆောင်​အ​နမ်း​ဟု​ဆို​သော ​စ​တယ်​လာ့ ​အ​နမ်း​က ​အ​သက်​ပါ​လာ​သည်။ ​တ​ဒ​င်္ဂ ​မ​ဟုတ်​တော့​ချေ၊
‘‘​အွန်း . . ​ဟင်း . . ​အွန်း . . ​အင်း . .ြွ​ပတ် . . ​စွပ် . . ’’
​နွေး​အိ​နူး​ညံ့​သော ​ရင်​သား​နှစ်​မွှာ​က ​ထွန်း​ဇော်​၏ ​ရင်​ဘတ်​ကြီး​ကို ​တင်း​တင်း​ကြီး ​ဖိ​ကပ်​မိ​သည်။ ​လှိမ့်​လူး​သည်။ ​ဤ​အ​ထိ​အ​တွေ့​ကြောင့် ​တာ​ဝါ​က​ရိန်း​မောင်း​တံ​ကြီး​က ​တ​ဖြေး​ဖြေး ​ထောင်​ထ​လာ​သည်။ ​သူ့​ကို ​ဟန်​ဆောင်​နေ​တာ​ပါ​လို့ ​ရှင်း​ပြ​လို့​ရ​မှာ ​မ​ဟုတ်​ဘူး။ ​အိုး . . . ​စ​တယ်​လာ .. ​မင်း​လက် ​နွေး​နွေး​လေး​က ​ယု​ယု​ယ​ယ ​ကိုင်​ဆွ​ပေး​နေ​တာ​ကော ​ဟန်​ဆောင်​တာ​ပဲ​လား​ကွယ် . . . . ။
​ထွန်း​ဇော် ​ချောင်​ပိတ်​မိ​နေ​သော ​လက်​ဝှေ့​သ​မား​လို ​ရုတ်​တ​ရက် ​ဘာ​ပြန်​လုပ်​ရ​မှန်း ​မ​သိ​အောင် ​ဖြစ်​နေ​ရ​သည်။ ​လမ်း​ပေါ်​မှ ​ကိုယ်​တော်​က ​သောက်​လက်​စ ​စီး​က​ရက်​ကို ​မြေ​ကြီး​ပေါ်​ချ​ပြီး ​ဟပ်ဖ်​ရှုး​ဖိ​နပ်​ဖြင့် ​ဖိ​ချေ​နင်း​သတ်​ပြီး ​ချာ​က​နဲ ​လှည့်​ထွက်​သွား​တော့​သည်။
‘‘​သွား . . ​သွား​ကြ​ပြီ ​စ​တယ်​လာ’’
​စ​တယ်​လာ့ ​ကိုယ်​သင်း​နံ့​မွှေး​မွှေး​လေး​က ​နှာ​ခေါင်း​ထက်​မှာ ​ထင်​ကျန်​ရစ်​နေ​ဆဲ​ပါ​လေ . . . ။ ‘‘​ဟင်း . . ’’ ​စ​တယ်​လာ​က ​ရှည်​လျား​လှ​သော ​သက်​ပြင်း​လေး​ကို ​ခိုး​ရှိုက်​ရင်း ‘‘ ​မော​သွား​တာ​ပဲ’’ ​ဟု ​တိုး​တိုး​လေး ​ပြော​၏။ ​ခန်​ဓာ​ကိုယ်​ချင်း​က ​ပး​ကပ်​ထား​ဆဲ​ရှိ​သည်။ ​စ​တယ်​လာ့ ​နား​ရွက်​က​လေး​တစ်​ဖက်​က ​ထွန်း​ဇော်​ရင်​ဘတ်​၌ ​ကပ်​ဖိ​ထား​ရာ ​ကျယ်​လောင်​သော ​ထွန်း​ဇော်​၏ ​နှ​လုံး​ခုန်​သံ​ပြင်း​ပြင်း​ကို
‘‘​ဒိတ် . . ​ဒိတ် . . ​ဒိတ် . . ​ဒိတ်’’
‘‘​ကို​ဇော့် ​ရင်​တွေ ​အ​ရမ်း​ခုန်​နေ​တယ်’’
‘‘​ဟုတ်​တယ် ​အား​ကြီး ​ယုံ​ပါ​ဘူး​နော်’’
‘‘​တ​ကယ်​ပါ ​ဒီ​လို ​မွှေး​အီ​တဲ့ ​အ​နမ်း​မျိုး ​တစ်​ခါ​မှ ​မ​ခံ​စား​ဘူး​သေး​ဘူး၊ ​ပြီး​တော့ ​ခု​လို ​အ​ကိုင်​လည်း ​မ​ခံ​ဘူး​သေး​ဘူး’’
‘‘​အယ် . . ​ယုတ်​မာ​တာ ​ကြည့်’’
​စ​တယ်​လာ ​လက်​သီး​ဆုပ်​က​လေး​များ​ဖြင့် ​ထွန်း​ဇော် ​ရင်​ဘတ်​ကျယ်​ကြီး​ကို ​ခပ်​ဖွ​ဖွ ​ထု​ရင်း ​ရှက်​ရွံ့​စွာ ​ပြော​သည်။ ​စ​တယ်​လာ့ ​ရင်​၌ ​ကြည်​နူး​နွေး​ထွေး​နေ​၏။ ​ထွန်း​ဇော်​လက်​က ​စ​တယ်​လာ့ ​ပေါင်​လုံး​လုံး​လေး​ကို ​ဖွ​ဖွ​လေး​ပွတ်​ရင်း ​ပေါင်​ရင်း​သို့ ​ရွေ့​လျား​လာ​နေ​သည်။ ​တ​ရုပ်​မ​လေး ​စ​တယ်​လာ​က ​သည်​လက် ​ဘယ်​ကို ​ဦး​တည်​နေ​သည်​ဆို​သည်​ကို ​သိ​သည်။ ​မ​တား​မြစ်​ရက် . . ​ထွန်း​ဇော် ​လက်​ခုံ​ပေါ်​မှ ​လက်​က​လေး​တစ်​ဖက်​ကို ​ခပ်​သာ​သာ​လေး ​အုပ်​ကိုင်​လိုက်​ရင်း ​မှေး​လိုက်​သွား​မိ​သည်။
‘‘​ဟ . . ​အား . . ​အဲ​လို ​မ​လုပ်​နဲ့​ကွယ်’’
​ကား​လေး ​သိမ့်​က​နဲ ​ငြိမ့်​က​နဲ ​ခါ​ရမ်း​သွား​၏။ ​ဒ​ရိုင်​ဘာ​ခန်း ​နောက်​ကြည့်​မှန်​တွင် ​ချိပ်​ဆွဲ​ထား​သော ​စံ​ပယ်​ပန်း ​အ​တွဲ​လေး​က ​ရမ်း​ခါ​သွား​သည်။
‘‘​ရှီး . . ​အ . . ​အ . . ​ယ . . ​ယ . . ​ယား​တယ် . . ​ဆို’’
​ထွန်း​ဇော် ​နူး​ညံ့​သော ​စောက်​ဖုတ်​နှုတ်​ခမ်း​သား​လေး​ကို ​အ​ပီ​အ​ပြင် ​ပွတ်​သပ်​ပေး​နေ​မိ​သည်။ ​လက်​ဖ​ဝါး​၌ ​၎င်းင်း​လက်​ချောင်း​များ​ဆီ​မှ ​လည်း​ကောင်း ​အ​လွန်​နူး​ညံ့​သော ​ဝါ​ဂွမ်း​အ​ထိ​အ​တွေ့​ကဲ့​သို့ ​မွတ်​မွတ်​စင်​စင် ​အ​ထိ​အ​တွေ့​ကဲ့​သို့ ​ထွန်း​ဇော် ​ခံ​စား​ရ​သည်။ ​တ​သိမ့်​သိမ့်​လှုပ်​ခါ ​တုန်​ရီ​နေ​သော ​ရင်​အ​စုံ​က ​ဆူ​လှိုက်​သော ​ခံ​စား​မှု​ကို ​အ​ပြင်း​အ​ထန် ​ခံ​စား​လိုက်​ရ​သည်။ ‘‘​ဟေ့​အေး​ကွယ် . . ​သူ​များ ​မ​နေ​တတ်​တော့​ဘူး’’
​မ​သိ​မ​သာ​လေး ​ရှိုက်​လှိုက်​သော ​အ​သံ​အက်​အက်​က​လေး​က ​ထွန်း​ဇော်​ကို ​နှိုး​ဆွ​ပေး​သ​လို ​ဖြစ်​နေ​သည်။ ​စ​တယ်​လာ​၏ ​ဝင်း​ဝင်​ပ​ပ ​မျက်​နှာ​လေး​က ​ထွန်း​ဇော် ​ရင်​ခွင်​တွင်း​သို့ ​အ​တင်း​အ​ကြပ် ​ပူး​ကပ်​တိုး​ဝင်​ရင်း ​အ​သက်​ပြင်း​ပြင်း ​ရှု​လိုက်​ခြင်း​ကို ​စ​တယ်​လာ​သိ​သည်။ ​ပေါင်​နှစ်​ခြမ်း​က ​ဟ​ပြဲ​သွား​ပြီး ​တင်း​မာ​နေ​သော ​ထွန်း​ဇော်​ပ​စ္စည်း​ကို ​အ​သာ​အ​ယာ ​ကိုင်​ပေး​မိ​သည်။ ​စ​ကား​တစ်​ခွန်း​တစ်​လေ​မျှ ​မ​ဆို​မိ​ကြ​ပဲ ​ဘာ​လုပ်​ကြ​မည်​ကို ​အ​ထိ​အ​တွေ့ ​အ​ပွတ်​အ​သပ် ​အ​ကား​အ​ပြဲ​လေး​များ​က ​အ​ပြန်​အ​လှန် ​စ​ကား​တွေ ​ပြော​နေ​ကြ​ပေ​သည်။ ​ကျဉ်း​ကျဉ်း​ကြပ်​ကြပ် ​ကား​ခေါင်း​ထဲ​မှာ​ပင် ​ထွန်း​ဇော် ​ပု​ဆိုး​ကို ​ဆွဲ​တင်​ရင်း ​ဖေါင်း​ကား ​အိ​စို​နေ​သော ​စောက်​ဖုတ်​လေး ​အဝ​၌ ​တေ့​လိုက်​သည်။
‘‘​ဟို့ . . ​အို ’’
​စ​တယ်​လာ ​နှုတ်​ခမ်း​လေး ​စု​ချွန်​ပြီး ​မျက်​ဖြူ​လေး ​လန်​သွား​သည်။ ​စောက်​ပတ် ​နှုတ်​ခမ်း​သား​လေး​နှစ်​ဖက် ​မ​ဟ​တ​ဟ​လေး ​ဖြဲ​ထား​သည့်​တိုင်​အောင် ​ကွမ်း​သီး​ခေါင်း ​လီး​ထိပ်​ကြီး​က ​ပြူ​တစ်​နေ​၏။
‘‘​ဘွတ် . . ​ဖွတ် . . ​စွပ်’’
‘‘​အို . . ​အား . . ​အ​မ​လေး’’ ​ခပ်​အုပ်​အုပ် ​ဆက်​တိုက်​ထွက်​လာ​သော ​အ​သံ​ညှင်း​ညှင်း . . .
‘‘​မ​ဖြစ်​ဘူး ​ထင်​တယ် . . . ​အ . . . ​အ​ရမ်း​ကြပ်​နေ​တယ်’’
‘‘ ​ဘွတ် . . ​ဘွတ် . .​ဖွတ်’’
‘‘​ဟေ့ . . ​အေ့ . . ​အ . . ​အား’’ ​စ​တယ်​လာ ​အ​ဆိပ်​ရှိ​သောြွေ​မ​ကို​မှ ​က​စား​မိ​ခဲ့​လေ​ပြီ​ကော ။ ..
‘‘​အား . . ​မ​ရ​ဘူး . . ​အု . . ​အား​ဟား . . ​မ​ရ . . ​မ​ရ​ဘူး’’
‘‘​ဘွတ် . . ​ဘွတ် . . ​ဖွတ် . . ​စွတ် . .ြွ​ပတ် . . ’’
‘‘​ဘွာ’’ ​ခတ်​၍ ​မ​ရ​သော ​က​စား​နည်း​တစ်​မျိုး​ကို ​စ​တယ်​လာ ​စိတ်​လို​လက်​ရ ​က​စား​မိ​ခဲ့​ချေ​ပြီ။ ​စိတ်​ကြမ်း ​သန်​မာ​လှ​သော ​ထွန်း​ဇော်​ထံ​မှ ​မြင်း​သိုး​ကြီး ​နှာ​မှုတ်​သံ​လို ​ပြင်း​ပြ​သော ​အ​သံ​ကို ​ကြား​နေ​ရ​သည်။ ​ဆီး​စပ်​မှ ​နာ​ကျင်​သော ​ဝေ​ဒ​နာ​နှင့် ​မာ​တင်း​သန်​မာ​လှ​သော ​လိင်​တန်​ကြီး ​အ​လိုး​အ​ညှောင့် ​ဝေ​ဒ​နာ​တို့ ​ရောြွ​ပန်း​ကာ ​စ​တယ်​လာ ​ထွန်း​ဇော်​ရင်​ဘတ်​ကို ​အ​တင်း ​တွန်း​ကန်​ထား​၏။ ​သား​အိမ်​ကို ​ထိုး​ဖောက်​၍ ​အ​စာ​အိမ်​အ​တွင်း​သို့​ပင် ​ရောက်​သွား​လေ​သ​လား ​ထင်​ရ​လောက်​အောင်​ပင် ​လိင်​တန်​ကြီး​က ​ကြီး​မား ​ထွား​ကြိုင်း​လွန်း​နေ​ပြန်​သည်။ ​ဒူး​နှစ်​ဖက်​ကို ​တင်း​တင်း​ဆုပ်​ထား​သော ​ထွန်း​ဇော်​၏ ​လက်​ကြီး​များ​က ​သန်​မာ ​တင်း​ကြပ်​လွန်း​နေ​ပြီး ​ဒူး​ဆစ်​က​လေး​များ ​ဖွေး​ဖွေး​လွ​လွှ ​သွေး​ဆုတ်​နေ​ရ​လေ​သည်။
​ထွန်း​ဇော်​အ​တွက် ​စန်း​ပွင့်​နေ​သည်​ဟု​ပင် ​ဆို​ရ​လေ​မည်​လား ​စုတ်​ဝင်​ကိန်း​က​ပဲ ​ယ​ခု​လ​ထဲ
​များ​နေ​သည်​လား​မ​သိ . . ​လှ​ပ​သော ​စော်​လေး​များ​နှင့် ​မ​မျှော်​လင့်​ပဲ ​ဖြုတ် . . ​ဖြုတ်​နေ​ရ​သ​ဖြင့် ​ထွန်း​ဇော် ​အ​ကိုင်​အ​တွယ်​တွေ ​ညင်​သာ​ကျွမ်း​ကျင်​လွန်း​နေ​သည်။ ​အ​ပွတ်​အ​သပ် ​အ​နူး​အ​နပ်​တွေ​က​လည်း ​ပြောင်​မြောက်​လွန်း​နေ​ပေ​ရာ ​ထွန်း​ဇော်​နှင့် ​ထိ​လိုက်​သော ​စော်​မှန်​သ​မျှ ​ပင့်​ကူ​အိမ်​၌​ငြိ​မိ​ရ​သော ​ယင်​ကောင်​နှယ် ​ခွာ​မ​ရ ​ရုန်း​မ​ရ​တော့​ချေ၊ ​စော်​လေး​များ​က​လည်း ​ထွန်း​ဇော်​၏ ​ကျန်း​မာ​သန်​စွမ်း​သော ​ကိုယ်​ခန်​ဓာ​ကိုယ်​ကို ​ကြ​ည့်​ရင်း ​မ​သိ​စိတ်​များ​က ​ဆာ​လောင်​နိုး​ထ​နေ​တတ်​ကြ​ပေ​ရာ ​ယ​ခု​ကဲ့​သို့ ​မ​မျှော်​လင့်​ပဲ ​ဖြစ်​လာ​ကြ​သော​အ​ခါ . . . . .
‘‘​အ . . ​အား . . ​ကျွတ် . . ​ကျွတ် . . ​တ​အား​ကြပ်​တယ် ​ကို​ဇော်​ရ . . ’’
‘‘​အ​ရမ်း​ကြပ်​လား ​စ​တယ်​လာ ​ဟင် ​ပြ​စမ်း’’
‘‘​အ​ထဲ​မှာ ​ထောက် . . ​ထောက်​နေ​သ​လို​ကြီး . . . ​ရှီး . . ​အ’’
‘‘​ခ​ဏ​လေး ​စ​တယ်​လာ . . . ​ခ​ဏ​လေး’’
​ထွန်း​ဇော် ​ကား​ဒက်(​ရှ်)​ဘုတ်​ထဲ​မှ ​လက်​သန်း​အ​စွယ်​ခန့် ​ဓါတ်​ခဲ​လေး​များ​နှင့် ​အ​သုံး​ပြု​သော ​လက်​နှိပ်​ဓါတ်​မီး ​အ​သေး​စား​လေး​ကို ​ထုတ်​ယူ​ကာ ​စ​တယ်​လာ​၏ ​စောက်​ပတ်​နှင့် ​သူ​၏ ​လီး​ကြီး ​တိုး​လိုး​တစ်​လစ် ​ဖြစ်​နေ​ခြင်း​ကို ​အ​နီး​ကပ် ​ထိုး​ကြည့်​လေ​တော့​၏။ ​စ​တယ်​လာ​က ​ဖင်​ကို ​ဓါတ်​မီး​ဖြင့် ​ထိုး​ကြည့်​ခြင်း​ကို ​ခံ​ရ​သည့်​အ​တွက် ​ရှက်​သွား​ကာ ​လက်​ဖြင့် ​အုပ်​လိုက်​လေ​သည်။ ​စောက်​ဖုတ်​ကြီး​ကို ​အုပ်​မိ​သော်​လည်း ​လက်​ကြား​ထဲ​မှ ​တ​ဆင့် ​စောက်​ခေါင်း​ထဲ​သို့ ​ဝင်​နေ​သော ​လီး​ကြီး​က​မူ ​သွေး​ကြော​ကြီး​များ ​ထောင်​ထ​နေ​သည်​ကို ​တွေ့​ရ​လေ​သည်။
‘‘​လက်​ဖယ်​စမ်း​ပါ ​စ​တယ်​လာ​ရဲ့ ’’
‘‘​အာ . . ​ဟင့် . . ​ဘာ​လုပ်​မ​လို့​လဲ . . ​လို့’’
‘‘​ဟေ့​အေး ​မ​ကြည့်​နဲ့​ကွာ . . ​ကျွတ် . . ​မီး​ပိတ်​လိုက်​စမ်း​ပါ’’
​စ​တယ်​လာ​၏ ​ကျန်​လက်​တစ်​ဖက်​က ​ဓါတ်​မီး​လေး​ကို ​လိုက်​လု​နေ​ပြန်​သည်။ ​စ​တိတ်​ရှိုး​စင်​မြင့်​ဆီ​မှ ​ဆူ​ညံ​နေ​သော ​ပ​ရိ​သတ်​အ​သံ​များ​က ​ထိုး​ဖေါက်​လွင့်​ပျံ​နေ​လေ​သည်။ ‘‘​ပိ​ကျိ . . ​ပိ​ကျိ’’ ​ဟူ​သော ​ပူ​ဖောင်း​သည် ​အ​သံ​က ​ပွဲ​ခင်း​အ​ပြင်​သို့ ​လွင့်​စင်​ထွက်​လာ​သည်။ ​ပ​ဒု​မ္မာ​ကွင်း​နောက်​ဖက်
​ဗံ​ဒါ​ပင်​လေး​များ​အောက် ​စီ​တန်း​ရပ်​ထား​သော ​ကား​များ​ထဲ​မှ ​ပေါ်​တာ​ကတ် ​အ​နီ​ရောင်​ကား​လေး ​ရှေ့​ခန်း​မှ ​တစ်​ခါ​တစ်​ရံ ​မီး​လင်း​လက်​သွား​သည်​ကို ​တွေ့​နေ​ရ​ပါ​သည်။
​လက်​ဝါး​လေး​ဖြင့် ​အုပ်​ထား​သော ​စ​တယ်​လာ့ ​လက်​ကြား​ထဲ​မှ ​စောက်​ဖုတ်​ကြီး​ထဲ​သို့ ​တ​နင့်​တ​ပိုး ​လိုး​ဝင်​နေ​သော ​လိင်​တန်​ကြီး ​ဒဏ်​ကြောင့် ​တ​ရုပ်​မ​လေး​၏​စောက်​ဖုတ်​မှာ ​သွေး​ရောင်​လွ​မှ်း​ကာ ​စောက်​ဖုတ်​တ​ပြင်​လုံး ​ရဲ​ရဲ​နီ​နေ​ရှာ​၏။ ​နီ​ကျင်​သော ​စောက်​မွှေး​လေး​များ​က ​လိမ်​ကွေး​ကာ ​ဘုတ်​စု​လေး ​အုံ​လိုက်​ပေါက်​နေ​ရာ ​ထွန်း​ဇော်​၏ ​လက်​တစ်​ဖက်​က ​စောက်​မွှေး​လေး​များ​ကို ​ဖွ​ဖွ ​ရွ​ရွ ​ပွတ်​သပ်​ဆွဲ​ယူ​လိုက်​မိ​လေ​ရာ ​စ​တယ်​လာ​၏ ​လက်​က​လေး​များ​မှာ ​တ​ဆတ်​ဆတ်​လေး ​တုန်​ကာ ​စောက်​ဖုတ်​ကြီး​ကို ​အုပ်​ကိုင်​ထား​ရာ​မှ ​မ​သိ​မ​သာ​လေး ​ဘေး​ဖယ်​သွား​ရ​ပြန်​လေ​၏။
‘‘​မီး​မ​ထိုး​နဲ့​ဆို . . ​အို့ . .’’
​ဘယ်​လို​မှန်း​လဲ ​မ​သိ​ဘူး ​ဒါ​က ​လမ်း​ဘေး ​ကား​ခေါင်း​ထဲ​မှာ . . ​စောက်​ပတ်​ကို ​စိတ်​တိုင်း​ကျ ​ဖြဲ​ကြည့်​နေ​ရ​မည့်​နေ​ရာ​မ​ဟုတ် . . ​စိတ်​ဆိုး​မိ​သည်။ ​ရှက်​သည် ​ဒေါ​သ​လည်း ​ဖြစ်​မိ​၏။ ​သည်​အ​ထဲ ​တစ်​တစ်​ဆို့​ဆို့​ကြီး ​ခံ​စား​နေ​ရ​သော ​လီး​ဒါဏ်​က ​တစ်​ကိုယ်​လုံး​ရှိ ​သွေး​ကြော​များ​ထဲ​သို့ ​အ​ဆိပ်​ရည်​များ ​ထိုး​သွင်း​နေ​သ​လား ​ထင်​မှတ်​မှား​ရ​လောက်​အောင် ​တ​ဖျင်း​ဖျင်း ​ခံ​စား​ရ​သည်။ ​နား​ရွက်​တွေ ​ပူ​ထူ​လာ​သည်။ ​နား​ထင်​တွေ ​တင်း​ပြီး ​တ​ဒိတ်​ဒိတ် ​သွေး​တိုး​သံ​ကို​ပင် ​နား​က ​ပြန်​ကြား​နေ​ရ​သည်။
‘‘​ဘွတ် . .ြွ​ပတ် . . ​စွပ် . . ​ဒုတ်’’
‘‘​ဟာ့ . . ​အ’’
​စ​တယ်​လာ​၏ ​လက်​က​လေး​ကို ​ရုတ်​တ​ရက် ​ဖယ်​ထုတ်​လိုက်​သည်။ ​သွေး​ရောင်​လွ​မှ်း​နေ​သော
​တ​ရုပ်​မ​လေး​၏ ​အ​စိ​လေး​က ​တင်း​ထောင်​ကာ . . . ​ထိတ်​က​နဲ . . . ​ထိတ်​က​နဲ ​လီး​ကြီး​၏ ​တင်း​ကြပ်​သော
​ဒါဏ်​ကို ​တင်း​ခံ​နေ​သည်။ ​လီး​ထိပ်​မှ ​အ​ရေ​ပြား​အ​ချို့​က ​စောက်​ဖုတ်​နှုတ်​ခမ်း​ပြင်​၌ ​တွန့်​ပြီး ​ကျန်​ရစ်​နေ​သည်။ ​ထို​အ​ရေ​ပြား ​တွန့်​တွန့်​ကြီး​များ​ကြား​မှ ​ဖေါင်း​ကား​နေ​သော ​သွေး​ကြော​ကြီး​မျာ​က ​စောက်​ပတ်​ထဲ​သို့ ​မ​ဝင် . . ​အ​ပြင်​၌ ​တစ်​ဆို့​နေ​ခြင်း​ဖြစ်​သည်။
​ထွန်း​ဇော် ​စောက်​ပတ်​နှုတ်​ခမ်း​နှစ်​ခု​ကို ​အ​ပေါ်​တက်​ခွ​ထိုင်​လိုက်​ပြီး ​လက်​ညိုး​နှင့် ​လက်​မ ​နှစ်​ချောင်း​ခွ​၍ ​ဆွဲ​ဖြဲ​လိုက်​သည်။ ​တ​ခ​ဏ​လေး​အ​ဖြဲ​၌ ​အ​ဆီ​နှင့် ​အ​သား​ဝင်း​ဝင်း ​နီ​ရဲ​အာ​ပြဲ​သွား​သော ​စောက်​ဖုတ်​ထဲ​သို့ ​လီး​ကို ​အ​ရင်း​ကပ်​သည်​အ​ထိ ​ခပ်​ဆတ်​ဆတ်​လေး ​ဆောင့်​သွင်း​ပေး​လိုက်​ရာ ‘‘​ဇွတ်’’ ​က​နဲ ​လီး​ရှေ့​ပိုင်း ​ဝင်​သွား​ပြီး​နောက် ‘‘ြွ​ဗတ်’’ ​က​နဲ ​လီး​အ​ရေ​ခွံ ​အ​ပြုံ​လိုက်​ပါ ​ဝင်​သွား​လေ​ရာ ‘‘​စွတ်’’ ​ဟူ​သော ​အ​သံ​နှင့်​အ​တူ ​စောက်​ပတ်​ထဲ​မှ ​အ​ရေ​များ ​လျှံ​ထွက်​လာ​လေ​၏။
​အ​ရင်း​သို့ ​ရောက်​သည်​နှင့် ​လီး​ထိပ်​က ​သား​အိမ်​၏ ​မာ​မာ​လုံး​လုံး(​ဘာ​မှန်း​တော့​မ​သိ​ပါ)​နှင့် ​တွေ့​ကာ ‘‘​ဒုတ်’’ ​က​နဲ ​ကျင်​တက်​သွား​ရ​လေ​သည်။ ​စ​တယ်​လာ ‘‘ ​ဟာ. . . ​အ’’ ​ဟာ ​လန့်​အော်​ရင်း ​ထွန်း​ဇော် ​ပု​ခုံး​နှစ်​ဖက်​ကို ​ယောင်​ပြီး​တွန်း​လိုက်​သည်။ ​သို့​သော် . .
‘‘​ဘွတ် . . ​ကျိ . . ​ဘွတ် . . ​ကျိ . . ​ကျိ . . ​ဘွတ် . . ​ကျိ . . ​ဘွတ်’’ ‘‘​ဘွတ်’’ ​က​နဲ ​တစ်​ချက်​ဆောင့်​လိုက်​တိုင်း ‘‘​ကျိ’’ ​က​နဲ ​ကား​လေး​က ​သိမ့်​ခါ​သွား​လေ​ရာ ‘‘​ဘွတ် . . ​ကျိ . .’’ ​ဆို​သော ​အ​သံ​သည် ​မ​ရပ်​မ​နား ​ဒ​လ​စပ် ​ပေါ်​လာ​နေ​လေ​တော့​သည်။
‘‘​ဘွတ် . . ​ကျိ . . ​ဘွတ် . . ​ကျိ . . ​ကျိ . . ​ဘွတ် . . ​ကျိ . . ​ဘွတ်’’
‘‘​အင် . . ​အင် . . ​အင် . . ​သေ . . ​သေ . . ​သေ​ရော​ပေါ့ . . . ’’
​စ​တယ်​လာ​က ​စ​ကား​ကို ​ပြတ်​တောင်း​ပြတ်​တောင်း ​ပြော​ရင်း ​နှုတ်​ခမ်း​လေး​ကို ​ကိုက်​ထား​ရှာ​သည်။ ​ထွန်း​ဇော် ​လက်​ထဲ​မှ ​လက်​နှိပ်​ဓါတ်​မီး​အ​သေး​စား​လေး​ကို ​စောက်​ဖုတ်​အဝ​သို့ ​အ​သေ​အ​ချာ​ထိုး​ပြီး ​ပြစ်​ပြစ်​နှစ်​နှစ် ​ဆောင့်​လိုး​ပေး​လိုက်​လေ​သည်။ ​လက်​နှိပ်​ဓါတ်​မီး ​အ​လင်း​ရောင်​အောက်​၌ ​စောက်​ပတ်​ကြီး​ထဲ​ကို ​စောက်​ရည် ​အ​ရွှဲ​သား​နှင့် ​လိုး​ဝင်​နေ​သော ​ထွန်း​ဇော်​၏ ​လီး​ကြီး​မှာ
​ပြောင်​လက်​စို​ရွှ​နြေ​သည်။ ​တစ်​ခါ​တစ်​ရံ ​ကျွတ်​ထွက်​လာ​သော ​လီး​ဒစ်​ကြီး​ကြား​ထဲ​၌ ​ဖြူ​ဖွေး​သော ​အ​မြုပ်​များ ​စီ​နေ​သည်​ကို ​တွေ့​ရ​သည်။ ​တ​ရုပ်​မ​လေး ​စောက်​ဖုတ်​ကြီး​အောက်​ဖက် ​ကြက်​လျှာ​စွန်း​ဒေါင့်​လေး​ထဲ​၌​မူ ​ပြစ်​ချွဲ​သော ​အ​မြုပ်​များ ​စု​ပုံ​စီး​ကျ​နေ​၏။
‘‘​ဘွတ် . . ​ဘွတ် . . ​ကျိ . . ​ကျိ . . ​ဖွတ် . . ​ကျိ . . ​ဖွတ် . . ​ဘွတ် . .’’
‘‘​အီး . . ​အ . . ​အ . . ​ဟင်း ​ဟင်း​ဟင်း . . ​တော် . . ​တော်​ပြီ . . ’’
‘‘​ဘွတ် . . ​သွပ် . . ​ဘွတ် ​ဖွတ် . . ​ဘွတ်’’
‘‘​တော် . . ​တော် . . ​တော် . . ​ပြီ . . ​ဆို​မှ . . ​အ . . . ​အ​ရမ်း​ပဲ . . ​အ . . . ’’
​စ​တယ်​လာ့​အ​သံ​က ​ငို​သံ​နှင့် ​ရော​၍ ​ဒေါ​သ​နိ​မိတ် ​လက်​ခ​ဏာ​လေး​ပါ​လာ​စဉ် ​ထွန်း​ဇော်​၏ ​လီး​ထိပ်​မှ ​ပူ​နွေး​ပြစ်​ချွဲ​သော ​သုတ်​ရေ​များ​ကို ​တ​ရုပ်​မ​လေး​၏ ​စောက်​ဖုတ်​ကြီး​ထဲ​သို့ ​တ​ဖြင်း​ဖြင်း
​ပန်း​ထည့်​ပစ်​လိုက်​လေ​တော့​သည်။ ​စ​တယ်​လာ့​ကိုယ်​လုံး​လေး​လည်း ​ဆတ်​က​နဲ ​ဆတ်​က​နဲ ​အ​ကြော​ဆွဲ​သ​လို ​တုန်​ခါ​သွား​ပြီး​မှ ​ပြင်း​ပြ​သော ​အ​သက်​ရှု​သံ​နှင့် ​အ​တူ . . . . . .